Onye ọka iwu Florida Cannabis - Maazị Cannabis - Dustin Robinson
Akwụkwọ Ugbu a
A kọwara Iwu Florida
Gee ya nti na PodCast ma obu Lelee YouTube na Iwu Iwu Cannabis Maka otu onye ọka iwu Florida Cannabis akọwapụtara nke anyị gbara ajụjụ ọnụ - nleta Maazị Cannabis Iwu, Dustin Robinson, na weebụsaịtị ya: Maazị Cannabislaw.com
Ọnọdụ Florida Cannabis / Iwu Marijuana
“Iwu Cannabis Florida” na-ata ahụhụ site na oke ịba ụba na ọnụnọ na-achọghị ọdịmma nke na-enwekarị ihe ihere banyere cannabis, nke a na-akpọ wii wii n'ụzọ iwu na steeti Florida. Florida nwere usoro marijuana ahụike siri ike yana ihe dị ka ndị ọrịa 300,000. Iwu marijuana n'ụzọ zuru oke na Florida ga-ebilite na ntụli aka dịka iwu wii wii ike ya dị - lelee 2022 maka votu maka ịse wii wii na Florida.
EBIGBO EGO: Inweta oru n’ime ulo oru Cannabis
EBIGBO EGO: Etu esi etinye ndị ọka iwu Cannabis maka azụmahịa gị
Chọrọ Imepe Mmepe Obere
Dị ka iwu cannabis Florida ugbu a, ọbụlagodi obere wii wii bụ iwu na steeti a. Ndị isi ahụ kwuru na ịnwe gram iri abụọ ma ọ bụ ihe na-erughị ya bụ ịda iwu adịghị mma. Ndị a bụ usoro iwu cannabis dị ugbu a.
Kedu otu nke a ga-esi gbanwee n'ọdịnihu, anyị ga - enwe ike ịhụ mgbanwe ụfọdụ na iwu cannabis Florida? N'oge a, anyị nwere ike ịhụ akụkọ ihe mere eme nke iwu cannabis na Florida. A macwo marijuana ọgwụ ọgwụ na steeti a, ebe a na-eji wii wii eme ihe na Florida dị ka ajụjụ.
Gini bu iwu Florida Cannabis di ugbu a?
Ọ bụrụ na ịnwee wii wii 20 ma ọ bụ ihe na-erughị wii wii, a ga-eji gị ụgwọ $ 1,000 kacha mma. Nwekwara ike inweta ezigbo afọ nke otu afọ n'ụlọ mkpọrọ obodo. Misdị ịkpa agwa a abụghị obere ihe jọgburu onwe ya. Iji ruo eruo maka ajọ ikpe, ị ga-enwerịrị ihe karịrị gram 20 nke wii wii.
Nsonaazụ ya bara ụba ma ọ bụrụ na ị na-ere wii wii. Nke a metụtara mpaghara dị ka 1,000 ụkwụ nke ụlọ akwụkwọ, kọleji, ogige, ma ọ bụ mpaghara ọzọ dị njọ ntaramahụhụ mpaghara akọwapụtara. You nwere ike nweta ezigbo ego $ 10,000 na ahịrịokwu ikpe kachasị afọ 15. Ndị a bụ iwu ugbu a maka ịnwe na ịnye mmadụ wii wii na Florida.
Iwu a dị n'okpuru nnukwu idegharị ya, ọkachasị n'ihi ndepụta ego nwere ike ịgbanwe ụlọ ọrụ wii wii Florida. Supremelọ ikpe Kasị Elu na Florida nwere ike ikpebi ịgbanwe iwu nchịkwa maka wii wii na Florida na njedebe 2020.
Na 2016, 70% nke ndị ịtụ vootu na Florida họọrọ iwu igbo ọgwụ siri ike dịka akụkụ nke mgbanwe iwu. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ 2017, emeela marijuana ọgwụ iwu n'ụdị oriri, ọgwụ, na vapes. Ọ bụ nnukwu nzọụkwụ maka ndị ọrịa Florida chọrọ iji wii wii ọgwụ maka ọnọdụ ahụike dị iche iche.
Hezụ hemp na Florida ghọrọ ọkọlọtọ n'ụlọ ọrụ. Nke a bụ akụkụ nke mmemme Ngalaba Ọrụ Ugbo na Ọrụ Ahịa site na 2019. Nke a butere ihe a na-akpọ "ahịhịa ndụ" na steeti a nke mepụtara ọtụtụ nhọrọ maka obere azụmaahịa na nke etiti.
Ugbu a, na 2020, ụgwọ ndị ekwuputara na-akwado atụmatụ maka igbochi iwu wii wii na Florida. Ebumnuche ahụ nwere ọtụtụ ndị na-akwadosi ọrụ ike, na iwu gọọmentị na-aga ịgbanwe kpamkpam.
Kedu ihe Gbanwee na Iwu Cannabis Florida na 2020?
Enwere amụma buru ibu na a mariụ wii wii na Florida ga-ekwe omume site na 2020. Nke a bụ ọkwa ọkwa sitere na gọọmentị Florida wii wii. Ha na-azọrọ na ị mariụ wii wii nwere ike ịgbanwe ntụrụndụ niile.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-emepe ebe a na-ere akwụkwọ na ebe a na-ere cannabis ga-ekwe omume ịzụta. Nke a ga - abawanye ohere azụmaahịa maka ndị ọrụ ugbo, ndị na - akọ nri, na ndị na - ere ahịa.
N'otu oge, n'afọ 2020, ịjuụ wii wii n'ọnọdụ ndị ka mma, ọ ga-ekwe omume maka ndị agha. Ndi nwere ikike inweta ikike itolite, hazie ya, nwaa ya ma ree ahia ya n’enweghi etiti. A ga-agbakwunye ndepụta ọrịa dịkwuo ogologo maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ marijuana ọgwụ. Courtlọ ikpe ahụ ga-atụle ntaramahụhụ maka ịjuụ wii wii ugbu a.
Mgbanwe ndị a niile ga-abịa na 2020. Iwu ọhụrụ cannabis ga-abụ oke mgbanwe maka ndị bi na Florida chọrọ iji wii wii n'uzo iwu.
Mee elu mee ka odi nma
Iwu iwu ikike cannabis ga-eweta mgbanwe dị ukwuu na ọnọdụ wii wii na steeti a. Ka ọ dị ugbu a, steeti iri na otu nwere iwu inye iwu maka ndị okenye karịa afọ 11. Marirụ wii wii bụ iwu maka ọgwụ na steeti iri atọ na atọ.
N’ọdịnihu, anyị ga-ahụ ịrị elu na mkpokọta wii wii. Karịsịa n'etiti ndị ọrịa na-eji wii wii maka ebumnuche ọgwụ. Ndị bi na Florida ga-enwe ike ịjuụ wii wii maka nzube ntụrụndụ ma ọ bụrụ na ụgwọ niile mezuru n'oge 2020.
Florida na-emeghe ụzọ ya maka mgbanwe dị ukwuu na ụlọ ọrụ wii wii, ihe na-aga n'ihu na-etokwa. Nri, nnabata, na nkesa ya kwesiri iweta ohere buru ibu maka ndi ulo oru na obere ulo oru. Site na imeju wii wii na Florida, anyị ga-enwe ike iji ma zụọ wii wii n'ụzọ iwu. Nke a ga - abụ nzọụkwụ dị ukwuu na mgbanwe nke iwu cannabis Florida.
Taa, anyị ga-ekwu banyere ihe niile gbasara iwu cannabis Florida. Ekelela m onye ọ bụla, aha m Tom Howard. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla, ịnwere ike Google Cannabis Lawyer ị ga - enwe ike ịchọta m. Ma taa, anyị nwere ihe omume pụrụ iche. Anyị ga-eji Dustin Robinson ekwu banyere iwu cannabis nke Florida. Dustin, daalụ maka isonyere anyị.
Onye ọka iwu Florida Cannabis - Dustin Robinson
Ee, ị maara etu ọrụ ahụ si rụọ. Ọ dabara nke ọma na anyị na-eme ọtụtụ ihe karịa ka anyị dị na mbụ. Na agbanyeghị, nke ahụ bụ ihe na - eme mgbe ịnwere igosi ihe ngosi n'ụsọ osimiri. Ebe ka i si na Dustin bia?
Anọ m na Florida. Anọ m na South Florida na-acha. Ọ bụ ihu igwe mara mma ebe a.
Yabụ na ị gaghị eyikwasị uwe ogologo ọkpa ka m nọ ebe a n'ihi na ọ dị ka ogo 25 na mpụga.
Ee, mba, ọ mara mma. Anọ m n'ụgbọ mmiri ụnyaahụ. Taa bụ ụbọchị ọrụ. Anyanwụ anwụ anwụ site na windo.
Kedu ụdị ihe ị na-arụ ọrụ na cannabis Florida?
Ihe Na-aga na Iwu Florida Cannabis
Anyị enwetala ọtụtụ ihe dị iche iche na-aga ebe a na Florida, o doro anya na anyị agụọghị ọnụahịa ahụ na-aga n'akụkụ hemp. Anyi nwere otutu ahihia n’akuku marijuana. Naanị ntakịrị akụkọ ihe mere eme ozugbo na Florida. Anyị nyere ọtụtụ ikike, ihe anyị kpọrọ MMTC gbadata ebe a, Treatmentlọ Ọrụ Ọgwụ Ọgwụ. Ndị ahụ bụ ikike iweputara agbanwe agbanwe ebe a na Florida. Akwụkwọ ikike site n'aka Ngalaba Ahụike. Ma mgbe nke ahụ gasiri, enwere ọtụtụ iwu ebe a na Florida. Yabụ na ugbu a, anyị nwere ikikere 22 na ọtụtụ n'ime ikike ndị ahụ ka enyere site na nkwekọrịta mmezi, na mpụga nke [crosstalk 00:01:47], kwuo nke ahụ.
Nke ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ, n'ihi na ebe a na Illinois, ha na-eche maka etu ha ga-esi mefuo ego iji gbaa gọọmentị iwu ma ha nwere ikikere ndị ọzọ enyere arụnyere n'ime nnukwu akpụrụ akpụ. Yabụ na m na-eche ma otutu nkwekọrịta idozi ga-abụ maka akwụkwọ ikike?
Ee, ọ dị mma, a ga m ekwu na steeti ọ bụla na-eme ikikere ọ bụla chọrọ ekenye nnukwu ego maka ịbido ịgba akwụkwọ. Ama m na Missouri kwupụtara ndị mmeri ha. Mụ na mmadụ ole na ole na-arụ ọrụ na ngwa Missouri na ezigbo ndị na-ede akwụkwọ, mgbe ha na-edepụta ya, ha na-edepụta ya ka ha nwee ike dozie onwe ha iji nwee ike ibute ihe na-arụ ọrụ ruo n'ókè ha enwetala ikike Yabụ na ọ bụ atụmatụ dị ọtụtụ mmadụ na-eji. Na ebe a na Florida, ikike nile di oke oke. M pụtara na anyị nwere-
ntinye vetikal nke Florida Cannabis Business
Ee. Yabụ ị ga - enweta… mpempe akwụkwọ ahụ na - ere maka nde $ 60. Ọ bụ ya, enweghị ụlọ, enweghị ọrụ. Yabụ na ọtụtụ ihe dị na ahịrị, ndị mmadụ achọghị ịma ịkwụ ụgwọ $ 1 nde ụgwọ ọka iwu iji nwaa ikikere $ 50 nde ahụ. N'aka ndị ọzọ, uru akwụkwọ ikike ahụ nwere ike ghara ịdị elu. Ọ bụrụ na inwere mpempe akwụkwọ, ka anyị kwuo, $ 500,000 ma ọ bụ nde, ị nwere ike na-enwechaghị ike ịgbazị ọkàiwu dị narị ole na ole. Ma mgbe akwụkwọ ikike ahụ ruru nde iri ise, ị ga-adị ka, “what ma ihe, aga m eleghara ya anya.” Ma oge ụfọdụ ndị ọzọ na-enweta ego ịgba akwụkwọ ahụ na-ahụ oghere -
Jidesie ike. Ma nke ahụ abụghị… Mba, nke ahụ abụghị eziokwu. Kedu ihe ọ bụ mgbe, chere… champerty nke ahụ bụ champerty ma ọ dị mwute ikwu na anyị ga-amụ ụfọdụ usoro iwu arcane. Yabụ ndị mmadụ, anaghị enye gị ohere ịme nke ahụ. Ọ bụ ihe ziri ezi, ihe na-arụzi ọrụ na mmezi. Na onodu, na ekwenyeghi na ị ga - eme Champerty dị ka ịgbanye ọnụnọ nke ndị nọ ebe dị anya iji gbaa ndị mmadụ akwụkwọ. Ọ dị mma na nke a bụ. Mana ọ bụ n’otu ụdị ihe ebe onye ọzọ na-abụghị onye ahụ metụtara akwụkwọ ikpe nwere mmasị na ya. Ya mere a na m eche na ha na-ekwe ka champok na Florida?
Anụtụbeghị m nụ okwu a. Ma m na-ekwu, na ngwụsị nke ụbọchị, enwere oge ebe ndị mmadụ nwere akwụkwọ ikpe mana ha enweghị ike ịkwado ha na ndị ọzọ na-abata itinye ego n'ụlọ ikpe n'ọnọdụ ihe. Yabụ, echere m na ọ bụrụ na a na-elekwasị anya n'ihe ụlọ na-elekwasị anya na nke a
Ehee, o si n'oge esemokwu-
Mana otu a ị chere na ọ ga - adị ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị na - apụ na ị na - achọ ịchọta ndị mmadụ ịgba akwụkwọ? Nke ahụ bụ ihe ebum n'uche ya, ma nke a bụ ọmụmaatụ ebe ndị mmadụ chọrọ itinye akwụkwọ gbasara akwụkwọ ikpe. Ha enwebeghị isi obodo ha ga-emefu ijeri $ 1 na ya. Ha wee banye wee hụ ndị na-achụ ego dị njikere itinye ego n'ụlọ ikpe maka ịkwụ ụgwọ maka ụfọdụ ego. Ha wee nweta ikike ma nwee ike igbuputa ya maka $ 55, $ 60 nde. Dika odi nkpa ugbua ha nyere… Ha eweputara ikike ikikere ohuru site na ndozi. A na-akpọ ha otu ihe. Ndị a bụ ndị mmadụ gbabatara n’otu isi ihe na usoro ngwa mbụ. Yabụ ugbu a, anyị nwere ikikere asatọ n'ime 22 ndị ahụ dị ọhụụ ma ha na-anwa iweli isi obodo iji rụọ ụlọ ọrụ ahaziri. [crosstalk 00:05:08] Ọ dị ihe dị ka $ 20 nde.
You sị vetikal, ihe ị na-ekwu bụ na ha na-eto, na ha na-echekwa, na ha na-edozi Ma nke ahụ bụ ihe owuwu maka Florida.
Ee, yabụ kedu ihe nzuzu na Florida ka ha kwesịrị, ha eto, hazie ya, nyefee ya ma nyefe ya. Ma ị gaghị enwe ike ibute nke ọ bụla. Yabụ na ọ dịghị ka ụlọ ọrụ nnyefe ọ bụla na-eme nnyefe ọrụ. Individuallọ ọrụ n'otu n'otu nwere ọrụ nnabata ha. Ga - eche na nke a agaghị adị mma ma ọ bụrụ na ịnwere ụfọdụ ndị agbataobi abụọ n'akụkụ ibe. Otu na-enye iwu site n'otu ngalaba, nke ọzọ na-enye iwu site na ngalaba ọzọ, ị wee nwee ụgbọala abụọ na-akwọ ụgbọala iji nyefee nso nso. Ọ ga-aba uru karịa ma ọ bụrụ na enwere ọrụ nnyefe nke nwere ike ịnara site na ha abụọ gafere n'otu ụgbọ ala. Yabụ na enwere ụfọdụ adịghị ike na enwere ọnụ ego ole ha ga na nnọkọ omebe iwu ọzọ ha wee na-anwa ịkọ. Enwere ụlọ ikpe Kachasị Elu na Florida, yabụ ụlọ ikpe dị ala leleela atụmatụ ahụ anya megidere iwu Florida anyị.
Kedụ ihe Florida mere, maka ka anyị kwuo maka etu Florida si bụrụ steeti wii wii.
Kedu otu Florida si agwọ ọrịa na Ahụike Florida
Florida mbụ anyị nwere iwu nke dị oke ụmị dị oke ala, tum tum dị ala THC.
Ọ dị ka West Virginia. Anyị na-ekwu maka azụ, West Virginia, ị nweghị ike inweta ifuru, ị nweghị ike nweta vapes, ọ nweghị ihe smokable na ị ga - ahazi. Ọ bụ otú Florida si bido? E kweghị gị ka ifuru?
Ee. Yabụ, Florida, m na-arụ ọrụ na ngwa West Virginia ugbu a na Ee, ọ bụ otu a ka West Virginia si dị. Na Ee, Florida malitere naanị site na ezigbo, usoro dị nfe na nke pere mpe. Mana ihe anyị batara bụ, enwere ntụgharị iwu. Ndozigharị usoro iwu kwudosiri na MMTC ndị a, Treatmentlọ Ọrụ Ọgwụgwọ Ahụhụ Ahụike Ahụike nwere ike too, hazie, nyefee ma ọ bụ nyefe. Yabụ ọ nwere okwu ahụ ma ọ bụ n'ụkpụrụ iwu anyị dị na Florida. Ma mgbe ahụ n’afọ 2017 mgbe onye omebe iwu gara ka ewee mezigharị usoro iwu a, ha na-akpọ ya… Ha kwuru na ọ na-eto, na -eme ihe, na-ebunye ya ma napụta ya, nke kacha wee kee ụlọ ọrụ nwere ike ime nke ga-emerịrị ha niile.
Ihe di iche di na ntinye na mmanye di iche n’oru n’ime ikike. Otu n’ime ha na - emekọrịta ihe, onye nke ọzọ bụ, Amabeghị m ihe ha kpọrọ ya.
Usoro nkwekọrịta / njikọta na Iwu Marijuana Florida
Ee, a jụrụ m ọtụtụ ajụjụ gbasara ikpe a na [inaudible 00:07:38] na onye dị ka, “Oh, ọ nwere ihe mgbagwoju anya. Achọghị m ịma ihe gbasara iwu. " Ọ dị ka, “Mba, ọ dị nfe. Ọ bụ ihe dị iche n'etiti ihe na. Iwu a jiri okwu ma obu nke putara ighara inuputa, hazie ya, mee ya ma obu bunye ya. Floridakpụrụ Florida batara wee jiri okwu ahụ, nke pụtara na agwaga ya ga-eme ihe niile ahụ. ” Yabụ ugbu a, Supremelọikpe Kasị Elu na Florida na-ewere ikpe ahụ na ihe ịrịba ama niile na-atụ aka n'ebe ha na-ekwenye na ọchịchị, nke ga-apụta n'ụzọ dị nkenke ga-agbajikwa, ha ga-alaghachite wee mepụta usoro kwụ ọtọ.
Ọ bụ njikọ dị n'otu na njikọ ahụ. Yabụ na conjunctiva bụ ma, na disjunctive bụ ma ọ bụ. Mba, ọ masịrị m. Nke a dị ka, n'ihi na ọ dị na isi ya. Anyị na-ekwu maka ịme iwu cannabis site na usoro iwu dị ka ọdịmma nke usoro iwu. Mana enwere ọtụtụ amụma na-aga na mkparịta ụka ndị ahụ. Yabụ na dị ka Florida ma ọ bụ na Illinois, anyị ga-enwe ndị omekome ma gị na-alụ ọgụ ihe okwu ahụ pụtara ma ọ bụ, Achọrọ m na ọ bụ ihe ọ pụtara. Ma ọ bụrụ na ha asị, “Ma ọ bụ,” a ga-echerịrị na ebe ahụ. Yabụ na site na ijikọ ya na ọzọ yana site na iwukwasị $ 100,000, $ 250,000 maka ịre steeti ka ị nwee ike idozi maka akwụkwọ ikike. Nke ahụ etinyela ọnụahịa ikike ikike cannabis, ọ bụghị naanị na steeti Florida, mana ebe ọ bụla dị elu karịa ka ọ gaara adị ma ọ bụ nwee ike ịdị.
Ee, eeh. Akwụkwọ ikike ahụ dị elu ma na-akwụwa aka ọtọ, ngalaba ahụike na-emefu ego buru ibu na iwepụta nke a ma ha enweghị ihe ha ga-eme. Ọ na - anapụkwa ego mmefu ego ha iji mejuputa ihe ndị dị mkpa nke MMTC ga - agbaso. Yabụ na enwereghị ikike dị ka o kwesịrị, n'ihi na DOH enweghị ego.
Ọ naghị eme ya. Ọ bụ nghọta m na enwere naanị dịka ndị egwuregwu anọ na Florida. Nke ahụ ọ̀ bụ eziokwu? Dị ka mmadụ ole na-
Akwụkwọ ikike ikike izizi nke Florida Florida
Otu akwụkwọ ikike izizi dị ka, echere m na ha nyere ikikere ọkpụkpọ anọ ma ọ bụ ise. Ya mere ụmụ nwoke ndị ahụ nwere nnukwu isi mmalite na ahịa. Ma na n'ihu na ha nyere ikikere, ma ugbu a anyị ruru ikikere 22. Ugbu a enwere naanị ihe dịka asatọ ma ọ bụ itoolu na-arụ ọrụ n'ezie. N'ime mmadụ asatọ ndị ahụ ma ọ bụ itoolu, anọ ma ọ bụ ise n'ime ha na-achị, n'ihi na ha nwere nnukwu isi mmalite.
Yabụ enweghị isi, yabụ ngalaba na ụkpụrụ, ha kwuru na ha amachiela na mkpụrụedemede iri abụọ na ise. Ọ bụghị naanị na ha ga-etolite, na-ahazi ma na-agbasa, na n'adịghị ka na Illinois ebe ha na-ama maka oke ọrụ ha oke na 25 square ụkwụ. Na Florida, ị baghị n’elu uto gị. You're tinyeghị onwe gị na nhazi gị. Ma maka ikesa, ị ga - ejedebe na ọnọdụ 5,000. Mana mgbe ibili na… Ka anyị rutere… Ndị ọrịa 25, ị na-enweta ọgwụ nkwụghachi ise. Yabụ ugbu a, anyị nọ ihe karịrị ndị ọrịa 100,000. Yabụ na ụlọ ọrụ ndị a ahaziri ike nwere ike inwe 300,000 gbakwunyere ihe ruru 25 nkesa.
Ma enwerekwa ụfọdụ iwu na-eme ka ụfọdụ n'ime ikike ndị ahụ nwee ike mepee ndị ọbịa. Ọ bụ ya mere na ha na-ekwu maka ya bụ akwụkwọ ikike kacha mma. Ma ọ na-efu oke ego buru ibu ọ bụghị naanị itolite, ọ bụghị naanị usoro, kamakwa ịgbalị imepe ọnọdụ niile ndị a na-eweta.
Ọ dị ka steeti Florida nyere mmadụ anọ ohere. Anọ
Ọ bụghị mmadụ anọ, ọ bụ ụmụ Florida anọ. Ma ọ bụghị mmadụ anọ ahụ. Ọ dịghị ka ebe ụmụ nwoke anọ nọ ọdụ, nọdụ nde mmadụ 20 n'otu n'otu, ha niile na-atụbakwa. Ndị a ga-abụrịrị ndị nzukọ wee gbakọta ma tinye ọtụtụ isi na ọtụtụ amamihe n'okporo ụzọ, maka na ọ bụghị gị ' Adịghị m eto ngwa ngwa.
Ọ dị mma, m na-ekwu ọbụna iji mezie nke ahụ, ọbụghị ma ụmụ nwoke Florida. Nke ahụ bụkwa ihe ọtụtụ ndị Florida na-ewe iwe bụ na enyere ikike ndị ọrụ ugbo ebe a na Florida ma enwere ụfọdụ ihe ha chọrọ na ha na-aga ebe a na-elekọta ụmụaka ruo afọ iri atọ. Mana ọ dị mma mgbe ha nwetara akwụkwọ ikike ahụ, e resịrị ha nnukwu MSOs. Ugbu a, ugbu a, Florida, mara mma nke ukwuu na ikike niile arụmọrụ bụ nke ndị MSO buru ibu buru ibu na-enweghị ihe ha ga-eme. Ha abụghị ụmụ Florida, ha abụghị ndị Florida. Ha abụghị ụlọ ọrụ Florida. Ha bụ nnukwu ụlọ ọrụ buru ibu. Mana imata, na nchebe nke onye ọrụ ubi, otutu ndi mmadu na - enye ndi oru ugbo a otutu nzuzu maka iresi ikike ndi a. Mana nke bụ eziokwu bụ na ebe nchekwa ego dị ka ihe siri ike dịka o siri bụrụ na ọ bụrụ na a na-ekekọta ya na ihe dị oke ọnụ iji wee rụọ ọrụ, ndị ọrụ ugbo a, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ ndị ọrụ ugbo bara ụba, ha nwere ike nwee otu nde ma ọ bụ nde abụọ, ha nyere "Enwere 30 nde.
Yabụ na ha enweghị nhọrọ ọ bụla. Ha enweghị ike ịga n'ụlọ akụ iji nweta ego. N'ezie, ha enweghị nhọrọ ọzọ ma ọ bụ ree ya maka izi ezi. Ọ bụkwa ihe ha mere. Yabụ, echeghị m na ọ bụ ezighi ezi nke onye ọrụ ugbo. Echere m na usoro ahụ niile nwere obere ntụpọ. Mana ị maara ihe, na njedebe nke ụbọchị ọ bụ usoro ọhụrụ ma echere m na Florida na-arụ ezigbo ọrụ. Echere m na njikọta vetikal nyeere aka n'ọtụtụ okwu dị iche iche. Ma echere m na anyị nọ n'oge anyị ga-agbanwerịrị ịgbanwe gaa usoro ala.
Ọ dị mma, ị chere… Ihe m na-ekwu bụ, maka na ọ bụrụ na ha agbanweghị na mbara ma ọ bụ nye gị ndị ọzọ ohere, mmadụ anọ ahụ na-aga na-elele ndị na-akụ ahịhịa ga-enweta ezigbo ya ma zụta ha. M na-ekwu, na nnennen na ha ga, ọ bụrụ na enweghị okpu, n'ihi na ebe a na Washington anyị nwere-
Yabụ na ihe ị na-ekwu, n'adịghị ka na Illinois ebe anyị nwere oghere ndị a gbasara ijide ikike ka onye ọ bụla ghara ịchịkwa ụlọ ọrụ ahụ. Na Florida ọ dị, ọ dịkwa ka ọ bụrụ na Washington ị nwere nsogbu chere ihu ebe ị nwere ụfọdụ ndị egwuregwu buru ibu na-eme ọtụtụ ihe na-eme. Ma emesighi ike igha n’ime egwuregwu.
Ee. Na ime ka o doo anya, na Florida ọ dịghị otu nwere ike karịa 5% mmasị n'otu akwụkwọ ikike. Yabụ na odighị ka you nwere ike… Otu ihe na Florida nwere ike ịzụta ikike ọzọ. Mana ee, m na-ekwu na enwechaghị okpu.
Ee e, ikikere ahụ ga-abụ iche. Yabụ na enweghị ezigbo ihe kpatara ha jikọrọ ọnụ n'okpuru otu akwụkwọ ikike. M pụtara na ikike nwere $ 50 nde uru. Yabụ kedu ihe ị ga-eji jikọta ha n'otu akwụkwọ ikike mgbe ị bara uru nke ukwuu? Yabụ, a na m ekwu na ị hụrụ ụfọdụ dịka MedMen, ha mere nnukwu ọfụma ebe a. Ama m na ha nwere nnukwu atụmatụ maka disinishọn ha ha tụfuru nnukwu mmadụ. Na otutu n'ime ha, MedMen na Surterra na-enweta ego na ebe a iji gaa maka ntụrụndụ, ha wee tinye nnukwu ego, yana o doro anya na ha na-egwu ntụrụndụ na-abịa.
Kedu ihe na-aga n’iwu n’iwu iwu ntụrụndụ Florida maka 2020?
Kpamkpam. Yabụ na e nwere otu abụọ na-ahazi Florida na mgbe ahụ, MILF arịrịọ. Yabụ, mezie Florida ga-amalite ezigbo n'oge. Nsogbu ha bụ na ha enwetaghị nkwado nke akwụkwọ ikike iri abụọ na abụọ a, yabụ na ha enwetaghị ego ha ga-eji nweta akwụkwọ nkwado. Chọrọ ihe ịdebanye aha karịrị puku asaa iji nweta ya na ntuli aka ebe a na Florida. Ha wee rịa ihe karịrị otu narị puku, ọ gara na nyocha ụlọ ikpe Kachasị Elu, nke a bụ ihe ịtụnanya na ha nwere ike nweta ya. Ma mgbe ahụ MILF batara na ha bụ MedMen na Surterra na-enweta ego ma ọtụtụ ndị were iwe ụfọdụ n'asụsụ ahụ. Iwe were m n’ihi na m chọrọ ka mmadụ niile na-emekọ ihe ọnụ. Ọ bụ ihe mgbakasị ahụ na anyị na-alụ ọgụ ọfụma ma ọ bụrụ na anyị niile ga-ezukọ ọnụ.
Yabụ ugbu a, ị na -ebuzi Florida nke bụ akara 100,000. I nwetala MILFS nke ahụ bu puku kwuru puku mmadụ bịanyere aka n'akwụkwọ. Oge ahụ na-achọ ịgba, ihu ọma na ha ga-enwerịrị ego tupu ọnwa Febụwarị, ha agaghị agha ya. Ha wee buru isi kpuchie isi ha. Yabụ na ọ bụ ihe nwute, ha nwere ohere ịbịakọta ọnụ ma echere m na ọ bụrụ na ha gbakọọ, anyị gaara ahụ ka ọ bụ n'iwu. Isi nsogbu bụ mmụba ụlọ. Amaara m na ị kpọtụrụ aha na mbido ihe nkiri ahụ na ị na-achọ ịlụ ọgụ n'ụlọ. Arịrịọ MILF enweghị ihe ọ bụla na ya gbasara ịrị elu ụlọ, iji mezie Florida.
Ugbu a ị na-ekwu arịrịọ MILF a, ị nyochara arịrịọ MILF? Maka na m na-anụ MILF ma dịkwa ka, "Echere m na nke ahụ gaara enwetabeghị akara ọzọ, karịchaa na Florida." Gịnị ka nke ahụ pụtara?
MLF Marijuana Legalization Florida
Know ma ihe, akpọrọ m ya akwụkwọ MILF. Ọ bụ ezigbo ajụjụ.
Ọ bụ iwu igbo wii wii na Florida. [crosstalk 00:15:50] Ma eziokwu ị kwuru na MILF, ọ ga - abụrịrị na ha na - ere ahịa, ha kwesịrị ịzụ ahịa na mgbe nke a gasịrị, n'ihi na [crosstalk 00:15:59] - -
Ma na i gha, i ghapula ya. Ee, mana nke ahụ bụ ụdị okwu ebe ị dị, “dịkwa mma, yabụ ị nwere ebumnuche abụọ a [inaudible 00:16:08] wee kwuzie, ị meela ka ọrụ gị sie ike okpukpu abụọ. Ọzọkwa, ụlọ a na-eto ka a ga-enye ndị ọrịa ọgwụ na ha abụọ? Ma ọ bụ gịnị kpatara esemokwu ụlọ nke otu onye kewapụrụ site na nke ọzọ?
Ya mere n'ezie Regulate Florida bụ ihe dịịrị maka onye na-eme kwa ụbọchị nke na ọchọrọ n'ezie ịme iwu wii wii. Ndị MMF na Surterra na-akwado òtù MILF n'ezie, ọ baara ha uru ịghara itinye ihe ọ bụla metụtara uto ụlọ. N’ezie ha gha ekwuo na ha gbachiri nkiti maka itolite ulo na ha gha hapuru ya onye omebe iwu, ha nwere ihe kpatara ha jiri ghapu ulo ha. Ha kwuru na ọ ga-agbagha mmezigharị usoro iwu yana iji nweta ngbanwe usoro iwu ịchọrọ ime ka ọ dị mfe, ha chọkwara idobe ya, dị ka arịrịọ MILF dị nnọọ mfe, dị mkpụmkpụ. Hazie arịrịọ Florida dị ogologo ma nwee nnukwu nkọwapụta na ya,
Ajụjụ m nwere banyere Florida yana Washington State dịkwa ka ya na [inaudible 00:17:11] ọ bụghị. Echere m na ọ bụ ajụjụ akụkụ abụọ. Nke mbu, ndi omebe iwu na Florida nwere ike imekorita ihe ha n’ezie ma tinye iwu? Maka na mgbe ị na-ekwu maka ịtụ vootu, nke a ga-abụ akụkụ nke abụọ. Put na-etinye ihe kwesiri imezigharị n’usoro ahụ ma ọ na-adịkarị mkpụmkpụ. Interprenye na-atụgharị okwu ahụ, ma na -eme iwu nke mere na ọ nwere ike bụrụ ụlọ omebe iwu dịka anyị nwere ma ọ bụ nwee ike na cannabis dịka ụlọ ọrụ?
Ee. Yabụ ugbu a, anyị nwere n'ezie Senator Jeff Brandes wepụta ụgwọ maka Senate maka 1860 nke bụ maka ndị okenye, n'ezie na nnọkọ omebe iwu ikpeazụ ụlọ nnọchite anya Michael Grieco, ọ na-ewepụta ụgwọ ntụrụndụ. Ọ maara na ọ bụghị, Mụ na Michael nwere enyi, ọ gwara m na ọ nweghi mgbagha. Mana ọ chọrọ izipu ozi, "Hey, nke a bụ ihe anyị kacha nwee ike ịnwe ịbụ akụkụ nke mkparịta ụka n'afọ gara aga." N'afọ a, Jeff Brandes gbara akwụkwọ a 1860. Ọ bụ ezigbo ụgwọ. M na-akwado ya. Ọ nwere, Ama m na anyị kwurịtara ọtụtụ ihe gbasara ihe metụtara iwu nke iwu nke Illinois. O nwere akụrụngwa, ọ na-enye ohere iwepu ihe ekperima. Yabụ ruo n'ókè ụfọdụ enwere ụfọdụ ihe nhatanha na-elekọta mmadụ ebe ahụ
Mana ọ naghị enye isi ihe ọ bụla maka ndị na-achọ akwụkwọ ka ha jide ikike cannabis ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Kpọmkwem, Ee. M pụtara na Illinois, dị ka ị maara, ị ga-enweta 20% nke isi ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-etinye akwụkwọ na onye nwere ikike na ikike ya. Yabụ na nke ahụ bụ nnukwu ọnụ ahịa ihe. Yabụ na onye ọ bụla na-anaghị etinye ego na mmekọrịta mmadụ na ibe ya mara mma nke ukwuu, ha enweghị ohere. Ya mere, ha ekenyeghị isi ihe ọ bụla. N'ezie-
Ga-egwu egwu, ọ bụ asọmpi ikike ikikere asọmpi.
Ee, na nke bụ eziokwu bụ na anyị na onye omebe iwu na-achọghị mgbanwe ugbu a, enwere ike obere na ọ nwere ike ịgafe onye omebe iwu. O yikarịrị ka ọ bụ site na mmeghari iwu. Mana ị maara ihe, n’ime ụlọ ọrụ a, ị maghị. Yabụ na ị maara, enwere m olile anya. O doro anya na m na-edeba mmegharị nke ụgwọ a. Ha na nnọkọ ugbu a, yabụ na ha na-ezukọ ma na-ekwu maka ya.
Eleghị anya ọ ga-ejedebe n'ụdị nke ọ dị ugbu a. Ọ ga-enwe ike ịgafe nyocha dị iche iche ruo n'ókè ọ na-ekpezi ya ma bụrụkwa onye anabatara. Mana ọ bụ nnukwu ohere. Ma ihe na-atọ ụtọ n'ezie banyere ya bụ na ọ na-, nnukwu ihe na Florida bụ vetikal njikọ. Anaghị enye ha ohere ịme ihe ọ bụla. Yabụ na-eto, ruo na nhazi, na-ekesa, ha enweghị ike iwepụ nke ọ bụla n'ọrụ ndị ahụ.
Senatelọ omebe iwu nke 1860 nyere ha ohere ịhazi ụfọdụ n'ime ha. Yabụ na nke ahụ pụtara bụ na a ga-enwe ndị na-eweta ọrụ ga-abata abata kọọkwa ụlọ ọrụ ndị a ikikere. Yabụ imirikiti mmadụ kwesịrị ịghọta na ruo n'ókè ha chọrọ iji ụgbọ njem, a ga-enwe ohere maka ụlọ ọrụ iji bulie ndị na-ahụ maka njem ụgbọ ala, na nke a adịghị ugbu a na Florida ugbu a.
Ikwuru na ị bụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọghị mgbanwe, mgbe m na-eche Florida, echere m na ndị agadi na Conservatism na ego niile dị ebe ahụ. Ebiburu m na Jọjia, n'ihi ya, amaara m ụdị echiche ọgụgụ obodo na ihe adịghị. Think chere dị ka onye bi na gịnị na ịbụ onye na-ele ndọrọndọrọ ọchịchị gị anya, enwere otutu ihe ndọghachi azụ sitere na Big Pharma? Anọ m na, kedu ka ndị mmadụ ga-esi erughị obodo gị ntuli aka karịa, n'ihi na onye na-echekwa m, ana m ekwu na anyị ga-eme wii wii ka ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ọ bụghị, ọ dịka mmanụ. Ọ dị mma karịa mmanya. Ọ dị ka emesịa mgbe anyị ruru na mmezu iwu anyị niile chọrọ, ọ ga - adị, ị nwere ike ịzụta ya dịka broccoli, ọ bụ eziokwu? Dị ka paụnd maka mkpụrụ ego 50, n'ihi na ndị mmadụ na-eto.
Ka ọ dịkarịa ala ka anyị dọta akara na vodka, dị ka kaadị [inaudible 00:21:09]. Ọ ga-abụ ụlọ ọrụ na-efu oke ọzọ. Ma ị nwere ike ịbanye na ya.
N’anya dị mma, ọ bụrụ n’ile n’otu n’usoro gọọmentị etiti, ị ga-ahụ na ndị otu abụọ amalitela ịgbakọ ọnụ n’okwu a. Echere m na ị na-amalite ịhụ na Florida, ị na-ahụkwa ya na ọtụtụ mba dị iche iche. N'ihi ya, echere m na akụkọ ihe mere eme, o doro anya na ọ bụ ndị na - echekwa kemgbe… Ma lee anya, enweghị m ihe ọ bụla megide nchedo. M n'ezie, Abụ m onye na - achọghị ọdịmma onwe m, ana m votu n'okwu ahụ. Mana n'okwu a, ike gwụrụ ha, mana ọtụtụ n'ime ha agbanweela. Agwaala m ọtụtụ ndị omebe iwu na-achọghị mgbanwe gbasara, na ha bụ ndị kwere ekwe. Ha agwala ụfọdụ ndị okenye usoro anyị nwere na Florida. Ha aghọtala ọgwụ. Offọdụ ndị dọkịta m na-arụ ọrụ emeela ka olu ha nụ ya na Tallahassee na Capitol steeti anyị,
You chere na ozi nke… Ewela iwe, olee onye ị chere na-esokwu ndị Florida banyere iwu wii wii? Ozi banyere otu o si di nma, ogwu gha aru oru, ma o bu ozi oma na ahia. N'ihi na mgbe m chere Florida, m na-eche na-achọghị mgbanwe, mana m na-eche, "Ee, mana ha bụ ndị na-echekwa azụmahịa. Ha na-eche banyere ihe ha na-eme. Ha na-echebara ọnụọgụ ha echiche. ”
Ọ dị mma nke mere na ozi ọ bụla ị na-achọ izi, lelee, n'ụlọ akwụkwọ iwu ka a na-akuziri gị mgbe niile ka ị mata onye na-ege gị ntị. Ma nke ahụ bụ otu ihe m… M maara ama ndị na-ege m ntị mgbe niile. Ga-amata ma ọ bụrụ na ị na-agwa onye ị na-agwa okwu okwu ọnụ, onye gụrụ akwụkwọ, onye na-anaghị enweta ego. Gha agh ụta onye ị na-agwa okwu. Na ee, ihe ndị na - eche na ndị na - achọghị mgbanwe bụ na nke a bụ ihe na - akpata ego. Enwere otutu ohere ebe a. Ọtụtụ ụtụ ụtụ ụtụ isi anyị nwere ike inweta, n’ezie anyị achọghị imehie ihe ndị California mere na ụfọdụ steeti ndị ọzọ site na ịtụ ụtụ isi.
Ma enwere otutu ohere azuma ahia nkem chere na nke a bara na ndi otu ekwenyeghi ekwesi. Mana ọ dịkwa mkpa ikwu mgbe ụfọdụ gbasara ụfọdụ ndị nwere nkwarụ. Ihe ịma aka ọzọ dị ebe a bụ ọtụtụ n'ime obodo ndị na-amachibido iwu nkesa nke nwere ikike na steeti anyị. Etuola m ọtụtụ ọrụ na ọkwa mpaghara, na-akụzi ụfọdụ ndị isi obodo banyere ihe mere na ekwesịghị ị machibido iwu. Ma o doro anya na ọtụtụ n'ime ihe ahụ dabere na ihere. Ọ bụ naanị na-ezi ọha na eze ma na-achọ
Marijuana na mmetụta NIMBY, ọ bụghị na mmetụta azụ m.
Mana ka anyị kuziere ọha na eze ugbu a na mụ onwe m bụ ndị ọha, n'ihi na esi m na Illinois ebe anaghị enye anyị ohere ịme ntuli aka ịtụgharị iwu anyị. Kedu otu ị ga - esi were obere obere mmegharị ahụ ha tinyere ebe ahụ wee mepụta akwa ụgbọ oloko iwu niile gụnyere iwu nchịkwa ka ị wee nwee ikike ma mezie ụlọ ọrụ cannabis? Ma ọ bụ ụlọ ọrụ wii wii na Florida?
Ọ niile amalite na arịrịọ, yabụ ị ga-edegharị akwụkwọ mkpesa, dịkwa ka m kwuru, mkpesa Regulate Florida dị ogologo. Ma ozugbo ị gabigara nke ahụ, echere m na ịchọrọ karịa akara 90,000. Lọ ikpe Kasị Elu na-eme nyocha gbasara ego na ha na-enyocha asụsụ ahụ, na asụsụ nke ndozigharị iwu kwesịrị ka o doo anya nke ukwuu ma ọ dị mkpa ka edozie otu isiokwu. Okwesighi ka ị kọwaa ọtụtụ isiokwu. You mara nke ọma, ozugbo ị gafesịrị nyocha nke Supremelọikpe Kasị Elu, ị ga-enweta akara ndị na-aka na ntuli aka, ịkwesịrị inweta ụdị akara 766,000 ma ọ bụ ihe yiri ya.
O wee banye na vootu, ị nwere votu ya. Mgbe ahụ ndị omebe iwu ga-abanye ma ha aga n’ihu [inaudible 00:24:45] ụkpụrụ nke kwekọrọ n'iwu ahụ. Nke ahụ bụkwa ihe ikpe Florida Court Court dị gbasara ebe onye omebe iwu batara. O dokwara anya na Iwu Iwu Florida kacha elu na Florida. Ma mgbe esemokwu dị n'etiti Iwu Florida na Iwu Florida, enwere esemokwu na a ga-ewere iwu ahụ dị ka iwu na-akwadoghị. Ma nke ahụ bụ ọnọdụ anyị nọ ugbu a.
Ọ na-eme, ọ bụ kwa ogologo oge mgbe m gara n'ụsọ osimiri ọwụwa anyanwụ. Oge ezumike mmiri, ọ ka nwere ihe karịrị mmadụ ahụ? Dị ka Daytona na ihe niile na-eme ka bụ ihe?
Kpamkpam. M na-ebi na Fort Lauderdale osimiri ya mere, abịa, n'oge March, ọ na-eme ala ebe a. Ana m agbalị ịhapụ n'akụkụ osimiri n'akụkụ oge ahụ.
Yabụ lee, arụmụka nke ekwesịrị ime ebe a, ugbu a? N'ihi na m na-echeta, na m na-eche anụ ọhịa na-eme.
Oke shit. Ọ bụ Jimmy Buffett nwere nke Sunterra ma ọ bụ Surterra na-eme ka iwe dị ọkụ, bụ na otu n'ime ụlọ ọrụ ndị… So Buffett nwere ụfọdụ ọrụ na ahịa cannabis Florida.
Ee, Surterra metụtara, a ga m agwa gị, ya na osimiri, otu n'ime Deerfield, ekwuru m okwu na Deerfield na-anụ mgbe ha na-achọ igbochi ebe a na-ese wii wii na ihe dọọrọ uche ha n'eziokwu bụ mgbe MedMen zụtara ọnọdụ ahụ n'ụsọ osimiri. . Na MedMen, ha bụ ntụrụndụ, ebe ha lekwasịrị anya, mgbe ị na-ele ya anya site na ahia-
Ee, ha bụ anụ ụlọ akụrụngwa ntụrụndụ na-egwu egwu, yabụ na ha nọ na-eche, "Oh, afọ ise site ugbu a anyị niile ga-enwe oghere, anyị ga na-ege reggae, ọ ga-adị mma.
N'akụkụ osimiri, chilling na Deerfield Beach. Na nke ahụ tụrụ ụjọ mkpochapụ nke ndị Deerfield. Ha mechakwara mee mmachibido iwu mgbe emechara. Na MedMen wee nweta ọnọdụ ha, mana ha machibidoro ya iwu. Echekwara m na mkpebi ahụ bụ n'ezie ihe megidere ihe e nyere ha ikike ime n'okpuru Iwu Florida. Floridakpụrụ Florida enyeghị ha ohere itinye… Ọ bụrụ na ha kwere inyeju marijuana, ha enweghị ike itinye okpu. Ihe m kwenyere mere ma ọ bụrụ na ị gụpụta nkeji nke ntị ahụ na nnọkọ Deerfield, nke a na-emekwa ebe niile n'obodo dị iche iche, n'ezie ntọala ha maka ịchọ machibido ndị diski okwu bụ na ha chere na ha enweworị ihe zuru ezu na ha.
Yabụ ọ bụrụ na iwu agaghị ekwe ka ị tinye okpu na mbido ihu na ego nke nkesa, gịnị mere ị ga-eji kwe ka ụfọdụ ohere wee sọọsọ, "Ọ dị mma, anyị ezuru, ugbu a anyị ga-amachibido ya . ” Ọ bụ nnoo na ọ bụ ihe karịrị ọdịdị. Ha na-eme otu ihe. Yabụ ọ bụrụ na MMTC chọrọ ịlụ ọgụ megide mmachibido ahụ, echere m na ha ga-enwe ezigbo ikpe.
O yiri m ihe nzuzu na Florida na ebe niile ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị asinine a na-egbochi wii wii n'akụkụ osimiri. Oge ọ bụla jọrọ njọ, m na-echeta mgbe etolitere na Florida ma ọ bụ n’Atlanta ma ọ bụ ihe ọjọọ niile, ma ọ dịkarịa ala, ememme n’oge ezumike mmiri bụ mmanya ọkụ. Youkwesiri inwe ihe ọjọọ karị na-eme n'obodo gị na-a fuụ mmanya na-egbu egbu tupu ịsị, "Ọ dị mma, ka anyị nye igbo ahụ ohere."
Mgbe Phish mere Big Cypress ka ọ kpọọ n’afọ ọhụrụ, na echeghị m dịka, “Oh chi m, enwere egwu Fish na-ewe awa asaa n’akụkụ osimiri, ụzọ iji gafee ite na Florida.” Ee e, m na-ekwu, mana na ihere bụ nwoke n'ezie. Nke ahụ jọgburu onwe ya jupụtara ebe nile. Ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ebe ndị mmadụ na-aga ịla ezumike nka, ọ na-emetụtakwa afọ. Echere m na nke ahụ nwere ike ịbụ
Ma m na-ekwu, ị hụrụ na o mere.
Yabụ na ya na Tuna Travel, ọ pụọla ebe ọ na-anwa ịga obodo imebi ihe ihere ahụ,
Mana ị na-ahụ n'ezie
Afuzi ahu gha buru. Amalitere m ịghara ịhapụ okwu dị oke egwu, mana m na-amalite itinye aka na oke olu psilocybin ma ana m amalite nkwado na-abụghị nke ahịa naanị izu gara aga. Anyị ga-abịa websaịtị anyị na Febụwarị, mana uru anyị na-eriteghị uru gbadoro anya na iji nyocha ahụike na nke mmụọ iji chụpụ ezigbo iwu nke psilocybin olu na Florida. Anyị emeelalarị ụlọ dị mkpa na ya. Ma ihe ịma aka ọzọ bụ ihere.
Ọ bụ otu ihe a na mkpụrụ osisi cannabis, ị ga-emeri ihere ma kwuo ya n'onwe gị, mmanya, ị nwere ndị na-a tooụ oké mmanya ma na-anwụ n'ihi mmanya na-egbu.
[inaudible 00:28:52] puku afọ a.
… Ọnweghị onye na-anwụ anwụ na-a smokingụ igbo, ọ nweghịkwa onye nwụrụ anwụ ị fromụ egwu psilocybin. Ugbu a, ha nwere ike ime ụfọdụ mkpebi adịghị mma echere m na ọ bụ ya mere m ji na-ekwu na anyị kwesịrị ịnwe nrụzi iwu kwadoro. Ọtụtụ mmadụ na-ewere ya n'okpuru otu ọnọdụ. Yabụ ndị mmadụ abanyela n'ihu ụgbọ ala na ọtụtụ-
psilocybin olu & Legalization nke Marijuana
Ọ bụ eziokwu, mana maka na ọ bụ ihe nwere ike ịmụrụ mmadụ, mana ọ dị ka ọ̀ nwere ihe ọghọm ahụike. Agbanyeghị, anaghị m agbagha na ya, tupu anyị atụgharịa uche anyị na iwu wii wii Florida, n'ezie na nkenke, kedu ihe psilocybin mere n'okpuru Iwu Na-achịkwa Ihe Efu?
Psilocybin enweela ọmarịcha akụkọ ọdịnala anyị. Na ihe na-atọ ụtọ bụ na ọ na-alaghachi, ị na-elele ebo dị iche iche, agbụrụ niile buru ibu ha ka na-eme ya ma na-ahapụ ụfọdụ n'ime ha ka ha buru ihe dịka Ayahuasca Burner maka ebumnuche na ihe ndị dị ka nke ahụ. Mana emeela nchọpụta ahụ. Ma n’ezie etu m siri banye na ya, nke m chere na ọ bụ ihe ịtụnanya n’ezie na ọ fọrọ obere, ọ bụghị ndị ahịa m niile, mana nnukwu ndị ahịa ahịa cannabis nwere mmasị dị ukwuu n’inweta psilocybin na ha nwere mmasị itinye ego, bulie isi obodo ma bido. na-eme ụfọdụ ihe, ma ọ dị na Jamaica. Denver mebiri emebi ya. Oakland mebiri emebi, n'ezie Chicago emebi emebi. Vermont nwere ụgwọ. Akwụkwọ Oregon nwetara akwụkwọ mkpegharị akwụkwọ.
Yabụ m na-enyocha ajụjụ ndị ahụ. Ma werezie n'eziokwu na abụghị m onye mmasị, maka na echere m na ọ bụ ụdị egwuregwu. Mụ onwe m ewereghị ọgwụ mmụọ. Ya mere agwara m ụfọdụ ndị dọkịta m nke m na-anọchite anya ya ma m kwuru ihe dị ka ndị dọkịta asaa ruo 10, ma gbadaa, onye ọ bụla n'ime ha bụ nnukwu ndị kwere ekwe na ọgwụ. Mgbe ahụ amalitekwara m nyocha nke onwe m wee malite ịgwa ụfọdụ ndị na-akụ ọgwụ na ndị na-agwọ ọrịa na Jamaica okwu. Na-agwa ndị psycheatrists ala ebe a na-eji ketamine, ụfọdụ ndị dọkịta na-ahụ maka ihe mgbu m na-eji ketamine. Ekwere m na nkea kariri uru ogwu banyere agwa psilocybin karia m na-enweta cannabis. Ihe akaebe na ha nwere buru oke ibu. Ma na FDA na-amalite ịbanye n’azụ ya. Yabụ na ọ si n’echiche FDA a na-anabata nke ọma karịa cannabis na-anabata.
Ma ị na-ekwu maka dị ka micro dosing, ọbụna dị ka ime ụlọ. Amaara m otu nwoke ebe a, ọ ga-etinye ha na capsules ma m pụtara, m na-echeta dị ka nwatakịrị, ịbụ onye kọleji, ị nwere ike ịlụ di na nwunye, emere m ya maka ntụrụndụ. Dị ka nke a ga-abụ abalị dị mma, n'ihi na m were ọtụtụ. Ma ọ bara uru ọgwụ. Ihe m na-ekwu bụ na ị na-ekwu maka ihe ndị metụtara ndụ. Ihe niile nwere ike inyere anyị aka, ọ bụ eziokwu? Yabụ na isi na ihe ndị ọzọ niile a bụ ihe,
Otu ihe m chere n’ezie dị mkpa. Mgbe ọ bụla mụ na onye ọ bụla na-eme njem banyere psilocybin njem, ha niile na-ekwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụdị dị ka ị maara, ha na-ekerịta otu akpụkpọ ahụ ha ma ọ bụ na ha niile nwere ịdị n'otu na [inaudible 00:31:49]. Ọ bụrụ na ị na-eche maka ihe atọ bụ isi ha na-achọ iji agwọ ya bụ psilocybin bụ ịda mba, PTSD na ihe riri ahụ. Ma oburu n’uche n’echebara ihe ato n’ime ihe ndia anya, odi ihe n’etu n’uche, enwere mmebi. Ihe dị ebe ahụ. Ma ihe psilocybin olu na-eme, ọ na-enye gị ohere ịwụfu nke ahụ ma meghee uche gị ma nweta echiche sara mbara ma wepụta uche gị n'ezie. Nke ahụ bụkwa ihe ha na-eme na Jamaica. Enwere ọtụtụ ụlọ ọgwụ ebe ahụ ị gara ma ị na-eme ezumike ụbọchị asaa na ihe ndị ọzọ [crosstalk 00:32:23] -
Ama m ihe m na-eme mgbe oge ntinye akwụkwọ anyị kwụsịrị ebe a na Mach-
Mana ịmara, ọ dị mma ịnara ọgwụ ọ fuụ nke na-eme ka ị ghara ịdị nwayọ dịka Xanax na ọgwụ anaghị emegide ụdị ọgwụ a
Ma ọ bụ nke a na-akpọ SSRI, onye ahụ ga-adị mma, mana m na-eche na iwu akwadoro cannabis na Florida, Illinois, Seattle. Yabụ na ọ dị ka idegulation ma ọ bụ mgbanwe nke psilocybin nwere njikọ na mmetụta na ụzọ anyị ji na narị afọ nke 20 iji hazie ọgwụ ndị a dị nzuzu ma zie ezi. Ọ na-ewutekwa anyị dị ka ọha mmadụ n'ihi na ọ na -eme ka nchekasị karịa, ndụ na-eri ahụ. Ha ga-akwalite nke ahụ n'ezie. Echere m, ị na-echeta azụ na 50s mgbe ha ga-enwe Flintstones na-ese anwụrụ ọkụ na telivishọn, na-erere ha ụmụaka. Ma ugbu a ọ bụ na ị ga - alụ ọgụ ga-abụ ihe e guzobere na narị afọ ahụ wee ga - adị ka, “Mba, lelee nyocha ahụike. Gịnị kpatara na anyị anaghị eme nke a? ”
Kedu ihe na-atọ ụtọ, a na m agwa ndị ọka iwu obodo niile na-eduzi ngagharị a. Ysmụ nwoke dịka Noa Potter onye, ​​ọ nọ na Blogchedched Psychedelic Iwu kemgbe 90s, m pụtara na ndị nwoke a na-eweta ọtụtụ ozi gbasara psychedelics yana usoro iwu na ihe ndị ọzọ. Mana ihe na-adọrọ mmasị na-anwa ịchọpụta ihe ọrụ dị na ya, ma ejiri m okwu ahụ mee ihe n'ezie, usoro iwu kwadoro ga-adị. Ọ gaghị abụ otu mkpụrụ osisi cannabis, a na-enwe ụlọ akwụkwọ nke ọtụtụ ndị na - eme ngagharị iwe na ha ekwenyeghị na ọ kwesịrị ịbụ usoro ahụike. N'ihi na mgbe ị na - eme ihe gbasara usoro ahụike, mụ na Noa Potter ekwuwo banyere nke a n'ogologo ọ nwere ezigbo ọhụụ banyere isiokwu a.
Ma mgbe ị na-ekwu gbasara ọgwụ, ọ bụ ma ì nwere ọnọdụ tozuru oke, yabụ ekwe ka ịme ya ọgwụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweghị ọnọdụ ntozu, ị bụ onye omekome yana onye omekome anaghị enye gị ikike ịme ya. Na mmetụta Noa na ọtụtụ ndị ọka iwu ndị ọzọ m gwaworo bụ na enwere nnukwu uru karịa ọgwụ maka psilocybin olu, dịka ọmụmaatụ nke mmụọ. Ọ bụ ya mere eriteghị uru m na-eji eji ahụike yana nyocha ime mmụọ na-eme ka mmezi iwu dị mma.
Nke ahụ na-ewe m iwe mgbe niile gbasara mmegharị cannabis bụ na ha ga-etinye kibosh mgbe niile na ikike mmeghari izizi. Ọ bụrụ na mmadụ asị, "Mba, ekwere m na cannabis maka ihe mmụọ, ọ bụ ikike m ịme okpukpe m etu m chọrọ isi na-eme." Ha ga-asị, “Neh.”
Na ma cannabis na olu, ọ bụ okwu metụtara. N'ihi na m na-ekwu, ndị mmadụ na-emegbu ya mana n'otu ihe ngosi nwere ike iweghara ya ma bie ndụ ha maka ya. Anyị emebi iwu, America na-ata ahụhụ site na ihe m ga-eche dịka likenwere Nkwuwa Okwu Nwanyi nwanyị, right? I meela ka iwe gwụ ya, ị na-edebekwa ya n'ime obere ụlọ ndụ gị niile ma ugbu a, "Oh shit, anyị niile agbafuola n'ihi na echefuru m ịkụziri gị otu esi eme ihe ziri ezi." Kọfị bụ ọgwụ, kafi a na-ebi kwa ụbọchị.
Ọ bụghị otú ahụ ka ọ ga-adị, ọzọkwa, ihe kpatara na anaghị m abanye n'ime olu, n'ihi na m mere otu oge, ha nyekwara m amị na pukes n'otu oge. Riblezọ jọgburu onwe ya ịmalite. Ma ị mara,… emee. Yabụ, na ọzọkwa, ọ ka nwetara m ụdị bọọlụ ịgba ọtọ, ọ bụghị ọkwa ahụ, mana ọ bụ oge mfu ego. Site n'ihe m lere n'ime ya, ha onwe ha adighi enwe shaman nke kwesiri ibu nduzi maka otu…
Aga m agwa gị, enwere ụmụ nwoke nọ na Miami na-eme ya. Agwawo m ha okwu na ha bụcha mgbamasị ebe a na-eduga ndị mmadụ na njem ime mmụọ ndị a. Enwekwara ndi otu ebe a na edobere ndozi azu na Jamaica ebe iwu zuru oke. Yabụ, ọ dị oke mkpa, ihe ha na-ekwu maka ya bụ ihe gị na ọnọdụ gị. Ikwesiri ijide n'aka mgbe ha kwuru, ị nwere ebumnuche ziri ezi ịbanye na ya, ma ịkwesịrị inwe ọnọdụ dị mma.
N'ihi na a na-adọta mmetụta gị n'otu akụkụ ma ọ bụ n'akụkụ nke ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na ịnọ n'ọnọdụ dị oke egwu gburugburu ndị ị na-atụkwasịghị obi na ndị ị nweghị mmasị, ị ga-aga njem jọgburu onwe ya. Na Anglịkan. O buru na ino n’ebe mara mma ebe o no n’etiti ndi mmadu na-elebara anya ma na elebara gi anya ma ndi n’acho ile anya. Nke ahụ bụkwa ihe ọrụ shaman bụ, bụ n'ezie iduga gị na njem ahụ.
Ma akpọrọ m nke a asị. Ọ bụ ihe na-atọ ọchị na enwere m mmetụta dịka afọ abụọ gara aga agaghị m ekwu ụdị okwu a. M na-enweghị hippie ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ. Ma ị maara
Nchoputa nke nkpagbu Marijuana na Florida Cannabis Iwu
Mba, ihe ndị a bụ eziokwu. N’ezie n’ezie, ndị hippies ahụ bụ [inaudible 00:36:48] oge niile.
Mana nke ahụ abụghị eziokwu, maka ugbu a, ị na-ahụ nkọja anyị na-alụ ọgụ na ozugbo. Maka na agaghị m eche afọ abụọ a gara aga ma ndị mmadụ na-ekwupụta nke dị ka, “Lee, amachibidoro m iwu ma ugbu a agafeela m ihe ahụ. Mgbe ahụ achọpụtara m na ọ bụ oke iberibe. ” Mana [crosstalk 00:37:05] nke ọrụ na-arụ ọrụ ihere mmadụ.
Iji ọgwụ ọjọọ, ị ga - akpọ ọnọdụ ime mmụọ, ma ọ nwere ma ọ bụ na anụ ọkụkọ. Ọ bụkwa akparamaagwa, ọ dị mma? Ofufe ime mmụọ, akparamaagwa. Ọ bụ uche anyị. Anyị na-ekwu maka ahụike uche, na nke ahụ bụkwa ihe ime mmụọ dịkwa. Ọ dị ka mgbe ị nwere ahụike dị mma na echiche ebe ị dị ka, “You ma ihe, ma ị na-ewere ya maka PTSD ma ọ bụ ahụ mgbu nkịtị, ị ka nwere ike rụọ ọrụ dịka mmadụ. Ndị mmadụ na-ebikwa n'amaghị ama. Ha na-ebi ndụ n'enweghị mmetụta ahụ dị mma. N'ihi na ha na-atụ egwu iwere ya n'ihi na iwu akwadoghị ya.
Ọ bụ ya mere m ji chee, ọ bụ ihe gbasara ịba uru. Echere m na anyị kwesịrị ibu ọrụ dị ka otu. Anyị kwesịrị ịdị na-elebara iwu anyị anya ma ọ dị mkpa ka anyị jiri aka anyị rụọ ọrụ. You marakwa, ọ bụrụ na ị drugsụọ ọgwụ n'echeghịghị eche ma ọ bụ nwee iwu na-enweghị isi ma ị ga-emebi iwu na enweghị iwu, abụghị m otu ahụ.
Yabụ na ọ dị ezigbo mkpa na anyị nwere mkparịta ụka ndị a. Anyị na-eme nyocha anyị kwesịrị ime, ma anyị na-enwe mkparịta ụka bara uru na anyị nwere ike… aga m ekwu eziokwu, amaghị m n'onwe m ihe iwu kwesiri ịdị. O bu ya mere erughi uru m, erughi m ka m ga-ekpe mbibi ugbua. Ihe m na-achọ ime bụ ime ka mmadụ mata, ọ bụghị naanị ndị obodo, maka onwe m. N'ihi na m chọrọ ịchọpụta usoro iwu ziri ezi yana enwere ebe ndị ọzọ dịka, lee anya Kevin na Denver, mụ na ya kwurịtara ụka. Ọ rụrụ ọrụ dị ukwuu n'ịduo Denver nke nwere oke mbibi, ịgwa ndị ụmụ nwoke nọ na Oakland okwu. Agwawo m ndị mmadụ ụka n'obodo ahụ dum ma ha arụ ọrụ dị egwu.
Mana ugbua mụ onwe m, enweghị m obi mma maka iwepụta iwu ụfọdụ ruo mgbe m welitere mmata nke onwe m na nke ahụ bụ ihe m na-achọ ime bụ iwulite ndi Floridians n'etiti mba ahụ, n'etiti ụwa na onwe m na ka anyị wee nwee ike ịbata ebe ziri ezi ebe a maka ụkpụrụ maka ya.
Ọ dị mma, ọ bụ ụdị ihe siri ike. Anyị na-akwalite dịka osisi ma ọ bụ ihe, mgbe ahụ ọ dị ka ikwu, sị, "Hey ụmụaka, gaa n'ihu na-a smokeụ sịga ụfọdụ igbo, mana achọghị m iburu onye ọ bụla na-emejọ ụmụaka ihe dịka, achọghị m gwa ha ka ha smokeụọ igbo. Amaara m na ọ nweghị mmerụ ahụ, anaghị m enye fuck. Ọ dị ka ha… But-
A bụ m onye na akwado maka inwe afọ opekata mpe. Echere m ma ọ bụrụ na m ga-ewere ọgwụ ndị a dị ka nwata, echere m na, ụbụrụ gị echeghị m na etoliterela. Mana dị ka mmadụ tolitere, ọ bụrụ na ị na-ewere ọgwụ ndị a n'ebumnuche, ma ọ bụ MDMA, enwere ọtụtụ ihe MDMA na-enyere PTSD, psilocybin olu, ndị a niile bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka mmụọ. Ọ bụrụ n’ị bụ okenye, i werekwa ebumnuche ziri ezi were nghọta ziri ezi, ekwere m n’ezie na ha nwere ike ịbụ ọgwụ. Mana ọ bụrụ na a na-eme ọgwụ ndị a, ha nwekwara ike ibute nnukwu nsogbu. Yabụ na ọ dị mkpa na anyị ga-enwe mkparịta ụka ahụ.
Nke ahụ bụ otu o si dị na iwu cannabis na Florida ma ọ bụ steeti ọ bụla, ị na-arịọ ndị mmadụ ka ha were ezi uche mara, nyocha nke mbụ, echiche eziokwu banyere okwu dị mgbagwoju anya na ha chere n'ụzọ ụfọdụ. Ọ dị nnọọ mfe nye mmadụ nanị ịsị, “Mba, anaghị m akwado ya. Achọghị m ihe ọ bụla. ” Maka na mgbe ahụ, ha ekwesịghị ịmepụta ihe ga-eme ha ka ọ dị ha ka ha ga-agbagha ihe ọ bụla, ma ọ bụ gbanwee ihe na-adịbeghị mbụ.
Yabụ ị nweta iwu cannabis ọhụrụ a na Florida ebe ị ga-enwerịrị $ 50 nde ma ọ bụ na Illinois ebe ọ bụ puku akwụkwọ 4,000 maka ikikere 75. You mara na ndị mmadụ ga-aga ikpe steeti Illinois wee nwaa idozi akwụkwọ ikike. Ma opekata mpe ihe mgbu ahụ na - etolite, ọ bụ na anyị na - arụ ọrụ site na usoro a iji jide n'aka na anyị nwere mgbanwe iwu. Ma m na-ekwu, ọ bụ nnọọ nlelị nke na ọ dị mfe. Ihe kachasị nfe bụ ịsị, “Mba, jichie ha niile.”
Ma nke ahụ bụ eziokwu, nke ahụ bụ ụdị ihe ndị obodo na-eme ebe a na Florida. Ha nwere ikike n’okpuru iwu anyị machibidoro ịmịnye ihe nkesa. Otutu n'ime ha na-ekwu, "anyi achoghi ime ka ihe iwu kwesiri idi n'iwu anyi. Ọ dịrị anyị mfe karịa ịnwe liner na-ekwu, 'A machibidowo ha iwu dị ka Florida Iwu 381.986.' Anyị ekwesịghị ichegbu ya. Mee ka obodo ndị ọzọ chọpụta ya. Ha ga-abụ ụlọ nyocha maka nnwale. Ozugbo ha mere ihe ha mere, anyị ga-atụle, gụgharịa. Nke n’ezie bụ ihe na-eme ugbu a bụ na obodo ndị ọzọ ahụ dịka gọọmentị etiti na-ahapụ steeti ka ọ bụrụ ụlọ nyocha nke experimentation-
Yabụ na nke ahụ dị oke mma. Anyị nwere ike ikwu ugbu a gbasara Iwu nke States. Echere m na ọ megidere Ndezigharị 14th. Kedu ihe ị chere gbasara Iwu Obodo?
Ọ dị mma, m kwuru, Iwu obodo ọ nwere ọtụtụ asụsụ dị mma na ya, o nwere ọtụtụ asụsụ ọjọọ na ya. Enwere m mmasị na mkparịta ụka a na-aga n'ihu na ụdị gọọmentị etiti dịkarịa ala ịkwanyere iwu steeti ugwu ruo n'ókè ụfọdụ. Ma n'ezie ihe ndị mmadụ na-aghọtaghị gbasara Iwu Steeti bụ, ọ bụ idebe iwu gọọmentị ka ọ dị oke mkpa na ikwe ka States bụrụ ụlọ nyocha nke nnwale. Achọrọ m ịnụ ihe nyocha gị dị ka ihe kpatara ya
N'ihi na mgbe ahụ ọ na-ewe iwu gọọmentị etiti na ọ nwere ụdị plọg na iwu steeti. Yabụ ugbu a, ị na-emeso ndị gọọmentị etiti n'okpuru iwu dị iche na steeti ọzọ yana yabụ na ọ bụrụ na m nọ na Indiana, abụ m onye omekome, mana ọ bụrụ na m bụ onye Illinois maka otu omume ahụ, enwere m onye nweere onwe ya. Yabụ na ọ hibere mba ohu a, ụdị nsogbu enweghị nsogbu. Ọ dị mma na ọ bụghị steeti ohu, ọ bụ ndị omekome na-ekwu, mana ọ bụrụ na ị nwere ike mebie mmadụ, ị ga-eme ha ohu dịka Iwu nke 13 si dị. Yabụ ọ mepụtara iwu gọọmentị na-enweghị otu nke na-emeso ndị mmadụ ihe dị iche iche dabere na steeti ahụ ha nọ n'otu ọrụ ahụ.
[inaudible 00:42:48] ziri ezi, n'ihi na abụghị m onye ọka iwu, abụ m onye ọrụ aka ebe a. Yabụ na ọ dị ka ụtụ ala steeti bụ nke na-ekwu, "dịkwa mma, anyị niile n'otu n'otu ga-eme ihe nke aka anyị," dị ka ịme iwu cannabis, n'aka nri. Ma ụfọdụ omume adịghị na ya ma ọ ka bụ n'ụzọ iwu kwadoro n'uzo na ezighi ezi n'ozuzu. Ruo n'okwu ahụ, olee etu nsogbu ndị ọzọ dị ka nke ahụ siri dị na America?
Ọ dịghị onye.
Anyị niile nwere ike ikweta na nwatakịrị na-emejọ ihe ọjọọ, mana anyị enweghị ike ikweta na ahịhịa a na-adịghị mma kwesịrị ịbụ… Nke ahụ bụ nsogbu. Ihe omume nke steeti m chere bụ nnukwu ihe, maka na ọ bụrụ na enwere ajụjụ ndị ọzọ miri emi gbasara ọha mmadụ nke na ha ga-akpasu iwe. E nwere ajụjụ ụfọdụ anyị jụrụ, mana azaa ajụjụ a. Anyị kwesịrị ịmịpụta etolite, debe iwu n'ihe ụfọdụ, gụziere ibe anyị ihe, dịka anyị niile maara ị drinkingụbiga mmanya ókè adịghị njọ, ọ ga-eme [crosstalk 00:43:38]. Ma ị ga-
Echere m na ihe dị mkpa ịghọta bụ na mgbe ị na-eche maka nnukwu ụlọ ọrụ, ọ na-esiri ha ike ịme mkpebi. Ha na-ewe ogologo oge. Ha nwere ndị isi na-ahụ maka ọrụ, ha nwere ndị na-ekenye ndị ga-aza, mgbe ị na-ekwu maka ndị obere ụlọ ọrụ, ha nwere ike ịme mkpebi ngwa ngwa. Ọ bụ ihe yiri nke a na steeti dị iche iche na gọọmentị etiti. Gọọmentị gọọmentị bụ nnukwu ụgbọ mmiri na-anwa ịtụgharị ma ha enweghị ike ịmegharị oge ọ bụla ngwa ngwa steeti nwere ike ịme ntụgharị.
Yabụ na ha na-anwa iburu ụzọ nwatakịrị ndị a wee segharịrị n'okwu ahụ ma nwekwaa ihe na-aga n'ihu na nwayọ mana n'ezie enwere m obi ike na a ga-agbahapụ iwu gọọmentị etiti nke cannabis. Ọ bụ naanị ụgbọ mmiri ahụ buru ibu ma sie ezigbo ike ịkwaga.
Ee. Ma ole ajụjụ ndị ọzọ gbasara omume na-enyocha ihe ndị a? Onweghi nke m g’ eche.
Ọ bụ ya mere m ji eme cannabis iwu, n'ihi na ọ bụ ihe pụrụ iche na ọ dị iche. Nke a bụ ya mere ụmụ nwoke dịka mụ na Thomas echere m… Ọ dị mkpa mgbe m na-agwa ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite ụlọ ọrụ cannabis na ị naghị eso ndị ọka iwu nke maara ihe ha na-eji cannabis, you're ga-abanye ụdị agbụ, n'ihi na ọ dịghị ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ndị mmadụ nwere ike iji ya tụnyere mmanya mmanya na ụfọdụ n'ime ntụrụndụ ndị a, ọ bụghị mmanya. Ọ dị omimi.
Ndi mmadu maara ihe onye oka iwu ozo nke na - ekwu na mkparita uka a na nso nso a?
Ehee. The Ihọd onye nnọchi-
Parnof. Enweghị m ike ugbu a, nwoke a, m na-ekwu, yana Keith Stroup zipụrụ ozi email maka ndụmọdụ gbasara iwu niile gbasara ya, mana echere m na ọ bụ onye ọka iwu na-agbachitere mpụ n'echiche na ọ nwere mmasị na cannabis na onye omempụ ya. ndị ahịa na-ekwu okwu n'atụghị egwu, mana echeghị m na ha na-akpọ ya nke ọma n'ụlọ akwụkwọ iwu. Echere m na ha na-akpọ ya ịnụ ọkụ n'obi, mana ka bụ ee, enweghị m ike icheta aha ya, mana ọ bụ onye ọka iwu omekome nke
Roddy. Echere m na eziokwu ahụ bụ na ọ [inaudible 00:45:38] n'elu onwe ya ịlụ ọgụ maka ụkpụrụ omume wii wii n'ụlọ ikpe, mana n'otu oge ahụ, ọ họtara iji nyere aka chebe nwoke a a na-atụba ebe ahụ, dịka akụkọ mba. . Ee, ọ bụ ego, kama,
Lelee wee dị ka nke ahụ. Ọ bụrụ na ọ kwụrụ ego ahụ o nwetara, ọ na-esite na Ukraine wee kwụọ ya Sly ma ọ bụ ihe ọ bụla aha ya, wee were nke ahụ gaa n'ụlọ akụ ya ma debe ya. Ha anapughi ya aka, n'ihi na o nwere okpukpu 2 MRB. Ugbu a, ọ bụrụ na m na-achọ ime nke ahụ maka ụlọ ọrụ iwu m, n'ihi na onye ahịa m na-akwụ m nne 50, ọ na-akwụ m $ 100,000 ka m gaa ịgba akwụkwọ steeti Illinois ka m wee dozie ikike. Banklọ akụ m nwere ike mechie m, maka na ha ga-adị ka, “Mba, nke ahụ bụ ihe dị iche iche ị hụrụ, ọ bụrụ na ịgbachitere onye maka mmebi iwu, ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ị na-agbachitere onye imebi mpụ, ị bụ onye nwere ọkwa 2 MRB. "
Ee, ee. Echere m, echere m na nke ahụ bụ iche, echere m na anyị dị ka ndị ọka iwu na oghere cannabis n'ezie tiptoe na n'ihi teknụzụ ma ọ bụrụ na anyị… Ọ bụrụ na ị na-agbachitere onye omekome, a ga-ahapụ gị ka ị na-agbachitere onye omekome. Mana ruo n’ókè nke wii wii n’ụzọ iwu na-akwadoghị, mgbe ọ bụla ị na-achọ ikwado azụmahịa a na-ese cannabis na ị na-eme ihe M&A, ị na-eme ihe gbasara ụlọ, ihe ọ bụla ọ nwere ike ịbụ.
Nke ahụ dị ka ịchọpụta mpụ gọọmenti etiti dị iche iche ugbu a.
Iji ghọta, ihe dị mkpa ụmụ nwoke gị, dị mkpa ụmụ nwoke. Tom na nke Dustin dịkwa n'akụkụ azụmaahịa nke ihe, ọ dị ka etu anyị nwere ike isi mezuo azụmahịa na America, ọ bụkwa obodo anyị. Ọ bụ otu anyị, ndị ọrụ na kọọ. Ọ dịghị amasị-
Ehee, America bụ isi ya bụ nkwekọrịta. [inaudible 00:47:20] iwu dị, yabụ dịka America mụrụ n'ezie atụmatụ a. Aghọtara m na ịnwere ike ịchọta ụlọ ọrụ ọzọ na Dutchlọ Ọrụ Dutch East India. Mana nke ahụ bụ maka ndị Dutch, dị ka ị maara, site n'echiche nke mba nke bụ ụlọ ọrụ na-enye ohere itinye ikike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na nkwekọrịta ndị ọzọ. N'agbanyeghị America adịghị ka obodo ọ bụla ọzọ dị tupu ya.
Ee. Na iji jupụta ihe anyị na-ekwu maka steeti ahụ [na-enweghị anụ ahụ 00:47:49], ugbu a ụfọdụ na-ekwu na ọ ga-abụ ndị omempụ na steeti ndị ọzọ ọ gaghị abụ mpụ. Ọ na-akpata ụdị ọgba aghara niile. Ihe anyị ahụbeghị na ụlọ ọrụ bụ ọnọdụ ebe ndị MSO ndị a, Ndị na - ahụkarị steeti na-arụ ọrụ. Ha kwesiri inwe aha mmado di iche na SOPs di iche iche maka steeti obula ha choro ime. Ọ dị oke arụ ọrụ. Ọ bụ ya mere m ji tinye ọnụ na ASTM D37 nke bụ ọkwa zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ cannabis. Ruo mgbe anyị nwere ụkpụrụ ụwa niile gbasara otu anyị ga-esi nwalee ngwaahịa anyị, otu esi etu aha ha, etu ekwesịrị iji chịkọta ha, otu esi ewepụ ha.
Ruo mgbe anyị nwere ụzọ usoro eji eme ihe, ụlọ ọrụ ga na-aga n'ihu na-adị oke arụ ọrụ, ụgwọ ọrụ ịzụ ahịa maka ụlọ ọrụ cannabis a ga-adị elu nke ukwuu. Ọ bụ ya mere m ji chee na ụfọdụ n'ime ọnụ ahịa ngwaahịa a ị na-ahụ ka ọ na -eme m ka m bu ọtụtụ ebumnuche. Mana otu n'ime ha bụ ihe ziri ezi, onweghị onye ga-ebula ụzọ were oke ego enwere na nnabata dị mfe site na steeti gaa na steeti. Gaghị enwe, “Hey, ndị a bụ aha anyị, ọ bụ otu a ka anyị ga-ere na steeti niile.” Ee e, steeti ọ bụla mgbe ị bụ MSO, ị ga-enwe steeti ọ bụla nwere aha nke aka ya ma mara ihe? Ọ ga-aka mma ka ị nọrọ n’elu mgbanwe mgbanwe iwu ọ bụla gbasara aha ndị ahụ n'ihi na iwu na-agbanwe ngwa ngwa na steeti ọ bụla. Ya mere, agala ịzụtara aha 100,000 maka na ị nwere ike ịchekwa onwe gị di na nwunye na pennies na ya n'ihi na ọ nwere ike ịgbanwe echi ya. Yabụ na enwere ọtụtụ nsogbu.
Yep mba. N'ihi na obodo ọ bụla bụ ihe nke ya. Ọzọkwa ị ga-enwerịrị ihe ọkọnọ ma na - eweta ọkpụrụkpụ otu esi ere site na steeti site n'onwe ya. N'ihi na ngwaahịa niile a ga-etinyere na nkewa. Yabụ na ịnweghị ike ịnweta akụ na ụba ọ bụla iji gosipụta na ịbụ onye ọrụ mmekọrịta dịka ị nwere ike maka ndị MSO ndị a. Mana nke ahụ, ihe ị ga - enweta bụ ụgwọ dị elu maka ịzụ ahịa, maka na ozugbo mmadụ chọpụtara na ịnọ na egwuregwu cannabis, ị ga - emerịrị ego niile, ha ga - atụkwa ọnụ ahịa gị n'ihi na ha chere na ị na - akpata ego. nyefee aka.
Anyị na-ekwu na akwa azụmahia maka ụfọdụ ọnụọgụ nke ndị na-akọ ahịhịa na ụdị ụdị ịgbasa ego ha ga-atụfu. Ee, ọ bụ azụmaahịa azụmaahịa, mana ọ bụ isi obodo na azụmaahịa ego. Yabụ na n'ihi na ọ nwere ike ịgbazinye ego buru ibu, ọ pụtaghị na ọ naghị efu nnukwu ego ịme ya ma ọ bụrụ na ị nwedịrị ikike ime ya. Ihe ndị a niile na - akpata nsogbu.
Mana otu n'ime ihe anyị ga-akpakọrịta na afọ iri na-abịanụ bụ koodu azụ wii wii, ma ọ bụ koodu azụ ahịa cannabis, ma ọ bụ ihe dị ka ebe ị na-ewere ma gosipụta ihe ndị a. N'ihi na ọ ga-adị ka iwu ọ bụla ọzọ, dịka ERA rutere steeti 38th ahụ. Ọ bụ gafere na 70s, nri. Mana mgbe ahụ anyị nwere nke ahụ, echere m na ọ bụ Ndozigharị nke iri abụọ na ise ka emefere na 25. Mana o were afọ ole na ole gara aga tupu edobe ya. Amaghị m, Abụghị m ọkà mmụta banyere iwu obodo, abụtụbeghị m ọkà mmụta banyere iwu obodo.
Schoollọ akwụkwọ iwu M ka mara mma na usoro iwu obodo karịa m ugbu a.
Ee. Maka na ị n'eziokwu, ọ bara uru na ndụ gị mgbe ahụ. Mana ọ dị mma. Ọ bụ ya mere m ji hụ ya n'anya, n'ihi na ọ bụ okwu akụkọ ihe mere eme na ọ bụ esemokwu na-adịghị ka ihe ọ bụla ọzọ ma nwee ọtụtụ ngwa dị iche iche. Yabụ na ọ bụghị naanị ọrụ ugbo, nnabata, ụlọ ọrụ, ọ metụtara ihe ndị ahụ niile, ọ na-atọkwa ụtọ.
Ma otu n'ime ihe m chọrọ ka ị gbaa gburugburu na-ekwu na anyị na-ekwu banyere otú Florida mbụ ọ bụ ala THC na mgbe anyị amaghị… Anyị enweghị ifuru smokable na nke a gbanwere na ikpeazụ mmebe iwu. Ugbu a, anyị nwere ifuru anwụrụ, m ga-agwa gị akwụkwọ ikike ugbu a enweghị ike iwepụta ya ngwa ngwa-
… Onye obula nwere ike ibu amuma udiri ifuru. Ma onye ọ bụla nwere obi ụtọ banyere apes na ihe ndị ọzọ niile a, ifuru-
Miggy, I buru amụma nke ahụ?
Dude, yabụ dịka ị na-ekwu maka ọnụọgụgụ mbụ, nke a bụ ihe a ga-ebu n'afọ. Ahịa maka cannabis dị ukwuu. Eziokwu unu bidoro site na ndị na-emepụta ihe anọ, [inaudible 00:51:48] ọdịbendị gị, ihe ọ bụla, ahụmịhe nke ndị ahịa gị. Mana ugbu a ị nwetala ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ dịgasị iche iche, ahụmịhe. Ọ ga-agbanye ihe nke aka ya, nke ya… Ọ nwere onye nwere ike ịme ihe omume. Onwere onye gha acho… Dika ihe nile na - eme na - eme ka a na - ekwu maka ndi na - ebugharị ebighi-ebi.
Nke ahụ bụ echiche kachasị mma ugbu a bụ na mgbawa ahụ mepere ka ị nwee ike nweta ụlọ ọrụ niile ancillary ahụ. Mana i kwuru ihe m chere na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, maka na abụghị m onye ọka iwu Florida. Ebughị m n’obi ịga nyocha ụlọ nyocha Florida. Anyị ga-ahụ ihe na-eme n’ọdịnihu. Mana ya mere unu ụmụ nwoke na-emezigharị usoro iwu, mgbe ahụ ndị omebe iwu malitere ime mgbanwe na nke ahụ? N'ihi na i kwuru na mmeghari ahụ kwuru, "Low THC, ọ nweghị ifuru a na-emebi emebi." Yabụ ugbu a, ha ewepụla THC dị ala na akụkụ ifuru na-emebi emebi.
Yabụ THC dị ala bụ n'ezie site n'usoro iwu tupu emezigharị usoro iwu. Ndozigharị iwu obodo batara wee kwe ka ngwaahịa THC dị elu. Constitutionkpụrụ iwu ahụ agbachiri nkịtị n'ihe banyere ịokụ iyi anwụrụ mana site na… Ma enwere akwụkwọ ndị gbara akwụkwọ na site na mkpesa, nke bụ isi bụ gọvanọ, mgbe gọvanọ batara, ọ na-ewepụta iwu na ọ bụ onye na-akwado wii wii. Ha we nyocha ya ka ewe kwere ya.
E nwere nnukwu arụmụka gbasara itinye okpu nke THC. Sitekwa n'ihe m ghọtara na nnọkọ omebe iwu ọzọ na-esote, enwere ihe ndagide ọzọ iji nwaa itinye THC okpu na usoro marijuana ahụike anyị. O doro anya, nke ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ banyere ụlọ ọrụ. Anyị na-agba mbọ mgbe niile inwe ọganihu, mana anyị kwesịrị ịnọgide na-alụ ọgụ naanị iji jide ọnọdụ anyị. Yabụ ugbu a, enyela ha ohere ịnwe marijuana ọgwụ THC dị elu na Florida. Mana nke ahụ [crosstalk 00:53:38] -
Guysmụ nwoke unu enweela ụdị ogige vape? N'ihi na nke a bụ… ọ bụ amara nke ọdịmma na ọdịmma, mana ọ ga-abụ ihe dịka 80% cannabinoids mgbe ọ dị.
Ee, anyị nwere pensịl vape. Ihe anyị enweghị, yabụ ihe na-atọ ụtọ bụ iwu na-enye ohere maka iri nri, mana Ngalaba Ag na Ngalaba Ahụike anyị kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ maka usoro oriri na usoro oriri apụbeghị. Yabụ ugbu a na Florida anyị enweghị achịcha, nke m chere bụ… Echere m na ọtụtụ ndị mmadụ na - ahọrọ iri nri mana ọ bụ ihe nwute na ndị ọrịa enweghị ohere iri nri. Ihe ọzọ dị mma na Florida anyị na-eche maka ya bụ na ha akwadoghị ụlọ nyocha nnwale ndị ọzọ na Florida.
Ee, m na-anọchite Labs Sayensị Green, nke bụ otu n'ime ụlọ nyocha praịmarị ebe a na Florida. Ha, ngalaba ahụike enwetabeghị ịmebe iwu nke atọ. Ugbu a, ha na-ewepụta iwu mberede nke emebeghị ka nke ahụ tinye… Ya mere ugbu a ndị ụlọ nyocha nnwale ndị ọzọ, Ngalaba Ahụike na-enye ha ohere ịnwe marijuana naanị nkwekọrịta. Enweghị ikikere nke ụlọ nyocha nnwale ndị ọzọ nwere, ha ga-enwerịrịrịrị ihe metụtara MMTC, Treatmentlọ Ọrụ Ọgwụ Ahụike Ahụike iji nwee ike ịme nnwale ahụ, bụ nke na-akpata ụdị nsogbu dị iche iche. N’ezie n'eziokwu, ugbu a na Florida a nwalere na-edozi onwe ya, nke pụtara ile anya, ndị a bụ azụmaahịa ma ọ bụrụ na ha ekwesịghị ịnwale ihe, ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịkpọ.
[crosstalk 00:55:05] na-ahazi onwe gị, ị ga-emeso FAA. Mana nke ahụ na-abịa na Illinois kwa ebe ha enweghị… M na-ekwu, ha kwuru maka akpa gbasara nnwale. Enwere labs ule mana ha emepebeghị maka nnwale nnwale ọhụụ na nke ahụ bụ azụmaahịa azụmahịa ahụ. Ha na-achọ igbochi ihe na Washington State, ọ bụghị ya?
Ee. Ee. Ọ dị mma, ụfọdụ ndị omebe iwu na-anwa ịkagbu ụgwọ bulshit 10%. Anyi na ele anya na, Anam eche na odi, dika i kwuru, i rute rue mgbe agha gha agha agha maka ihe i nweburu.
Kachasị aga [inaudible 00:55:37], ọ naghị akwụsị. Ọ na-alaghachi ma ọ dị ka, “Ehee,, na-eji ya etu esi etinye ya?” “Ee.”
Ajụjụ ndị m nwere ike ịjụ bụ, “N’ihi gịnị? Gịnị kpatara na ọ dị oke mkpa na anyị nwere oke ndị a? ”
Gosi m [crosstalk 00:55:50] ebe osisi a metụrụ gị aka? M pụtara, njọ, kedu ihe ọ mere gị?
Ee. Ọ dị mma, enwere… N'ime ọnwa ole na ole gara aga, ha wetara ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ ndị dọkịta, ọtụtụ ndị egwuregwu sitere na steeti na-emegidekwa cannabis na Tallahassee enwere ọtụtụ ndị na-ekwu okwu na-ekwu na-aga ebe ahụ. Ha nọkwa na-enwe oge ihe ọmụmụ na ngere ebe ndị dọkịta a na-ekwu n'ụzọ bụ isi banyere ihe ize ndụ nke oke THC dị elu. Aga m agwa gị, o kpatara ọtụtụ iwe na ọtụtụ ndị dọkịta mụ na ha na-arụ ọrụ. You makwa, ugbu a ha na-amalite itinye oge nkwado nke onwe gị, na-akọwa ihe kpatara o ji dị mkpa ịnweta ohere na THC dị elu.
Na eziokwu n'eziokwu ugbu a, gịnị ga - abụ ma ọ bụrụ na ha ga - eme ihe ebe ha na –eme ọnụ ahịa THC. Kedu ihe na-atọ ụtọ bụ eriri niile na ụdị ihe ọkụkụ niile na-eto ugbu a ma ọ bụ maka akụkụ ka ukwuu maka THC dị elu, ọ dị mma? Yabụ ọ bụrụ na iwu ahụ ga-abanye, ihe bụ isi ụlọ ọrụ Florida ga-emezigharị na ụdị nsogbu niile na ụdị niile na ihe ọ bụla ha na-eme, nke ga-eme ka okwu gbasara nnabata onye ọrịa na ụdị okwu dị iche iche. Atụrụ m anya na
Ọ dị ka ha na-anwa amachi ọkwa THC.
Kedu ihe bụ nke ahụ?
Kedu ụlọ kacha elu ha na-achọ igbochi ya?
10% bụ ihe ha tụlere.
Ee e, nke ahụ dị ka, ọ bụrụ na anyị nwere Ethan Russo, Dr. Russo nọ ikuku, ọ ga-adị ka, “Mba, nke ahụ bụ ọkwa cannabis abụọ Chemovar.” N'echiche na nke ahụ bụ ndị ahụ nwere nguzozi, n'ihi na ị nwere nha 20 ruo otu, nke na-abụkarị CBD hemp gị, dị ka eriri gị na-ebuli elu. Na mgbe ahụ ị ga - enwe oke nke na mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị THC niile, nke ahụ ga - adị ka Gorilla gluu gị. Yabụzie ọ bụrụ na ị mere ya dịka onye na-ebuli gorilla, mgbe ahụ nke ahụ kwesịrị ịbụ nke ga-aba uru nke THC CBD nke ọma. Ma ndị ahụ nwere ike karịa 10%, yabụ ị ka kwesịrị ịdị na-ele ifuru gị. Yabụ mgbe ị ga - enweta, ọ ga - adị ka ịsị na ị ga - eburu apụl niile mgbe ha achabeghị.
Echere m ihe, anyị ga-a moreụ sịga. Ọ bụrụ na ị na-ekwu karịa wii wii 10% THC wii wii, ị ga na-eri wii wii karia ma eleghị anya ị ga-akwụkwu elu. Just gha emecha ego. Yabụ na ọ ga-ewute ndị ahịa, onye ọrịa ahụ nke ga-azụrịrị wii wii ọzọ iji rute-
Enweghị ụlọ ndidi na-etolite na Florida ma, ọ dị mma?
Gbazie. Yabụ ibikọ ụlọ bụ nnukwu nsogbu. O doro anya na ikike ikikere iri abụọ na abụọ a bụ m chere na ha nwere ike ị na-aga imegide ya. Ma ikikere iri abụọ na abụọ ahụ
Maka ndị ọrịa ka ọ bụ maka ndị okenye?
Echeghị m na akwụkwọ ikike iri abụọ na abụọ ahụ ga-achọ ka ụlọ tolite ma ọlị.
Ee, lee, amaghị m. Mana na njedebe nke ụbọchị, ikikere 22 a, dịka m kwuru, na Florida ọ bụ nnukwu ahịa. Akwụkwọ ikike iri abụọ na abụọ a nwere ọtụtụ ego n’azụ ha na ọtụtụ ndị na-anabata ụlọ ọrụ nọ na Tallahassee ugbu a na-agbagharị maka ọdịmma ha. Yabụ na nke ahụ bụ otu n'ime nsogbu ndị ị ga - emerịrị bụ eziokwu bụ na ị ga - enweta akwụkwọ ikike 22 a na - eji dollar na - akwụ ego na - akwụ ụgwọ na - ejide ụlọ na - etolite na [inaudible 22:00:58]. Ugbu a lee anya, amataghị m, enwere ike… enweghị m okwu, achọghị m ikwu okwu n'aha ndị nwe ikikere niile. Ikekwe ụfọdụ n’ime ha na-akwado ya. Mana site n ’ụzọ sara mbara, o yikarịrị ka ha ga-ewere ọnọdụ dịka ime ụlọ toro.
Mara, ụmụ nwoke na-efufu nnukwu ego maka ịkọwapụta na ntụrụndụ ga-agarukwa dọla ndị njem. N'ihi na ugbu a ọgwụ gị kwere nkwa 100%. M na-ekwu, enwere ike ọ gaghị enwe ihe ha na-akpọ ntụpụ, hapụ steeti, kedu. Mana ana m ekwe gị nkwa na nke ịzụrụ ọgwụ na-agara ndị bi, ndị na-abụghị ọgwụ. Yabụ ozugbo ha nwere ịzụ ọgwụ ahụ maka ntụrụndụ, ma ọ bụ ịzụta ntụrụndụ, ị ga-adọta nwoke ahụ na-adọrọ ihe ọ na-akpọ ahịa ojii, mana ọ bụ ezigbo onye ọgwụ. Na-enwetaghị ahịa ahụ na njem ya. Dịka ụnụ, unu onwe unu agbahapụla njem nlegharị anya, ọ bụ ihe unu bi na ya.
Oh, nke ahụ dị aghụghọ. M na-ekwu, ọ bụ ya mere na ndị a na-emefu ego buru ibu na akwụkwọ ikike ebe a, nri? Echere m, lee, ha anaghị eme ya maka ndị ọrịa 300,000. Ha na-eme ya maka mmadụ 20 nde mmadụ anyị nwere, yana njem niile anyị nwere. Ya mere ndị a abụghị… Anyị enweghị ndị mmadụ bịanyere aka na ntinye akwụkwọ maka $ 50 nde maka mpempe akwụkwọ nanị n'ihi na ha chere na ha nwere ike ịnweta ndị ọrịa 300,000. Ha na-eme ya n'ihi na ha na-ahụ na mgbe ntụrụndụ na-eme ebe a na Florida, ọ ga-abụ nnukwu ohere. Ma n'eziokwu, ọ ga-abụ oke egbe.
A ga-enwe ọtụtụ, ọtụtụ ego ị ga-eme. A ga-enwe ọtụtụ asọmpi. Ị maara ihe m chere? Lee, na njedebe nke ụbọchị, ọ dị ka azụmaahịa. Gha enwe ike inwe ụmụ nwoke, a na m agwa ọtụtụ mmadụ, ha chọrọ ịbanye na ụlọ ọrụ a, ha na-eche na ọ dị mfe ego. Ee e, ọ dị ka azụmahịa ọ bụla ọzọ. Got ga-abụ onye maara ihe. Got ga eso ndị mmadụ matara ihe ha na-eme, soro ndị ọka iwu ziri ezi, ndị ọrụ nchekwa ego, ndị ọrụ aka nri, ndị na - etinye ego aka nri, na ị ga - asọrịta mpi. Dị ka azụmaahịa ọ bụla ọzọ. Enweghị ụzọ dị mfe iji mee bui-
Nke a dị oke mma, nke ahụ nwere ike weghachite anyị ihe anyị nwere ike iji kechie ebe a. Dustin, maka wii wii Florida na 2020, kedu ihe ị hụrụ ka ị na-eme?
Ọ dị mma, marijuana Florida na 2020? Yabụ ugbu a, anyị nwere okwu ikpe ụlọ ikpe a. Anyi nwekwara ụgwọ ahụ m kwuru gbasara nke ahụ n’ime ndị omebe iwu. Ahụghị m ụgwọ ahụ na-agafe. Enwere m olile anya, ọ bụrụ na ọ ga-adị oke mma, anyị ga-enwe ntụrụndụ ebe a. Ahụghị m ụgwọ ahụ na-agafe. Ahụghị m onye omebe iwu na-eme ihe ọ bụla ruo mgbe Supremelọikpe Kasị Elu nke Florida kpebiri mkpebi ahụ. Ikpe ahụ, ọ bụ ikpe Florida Grown. Nke a bụ ụlọ ọrụ wetaara ya, ana m enwe olileanya na Courtlọikpe Kasị Elu ga-ekpebi nke ahụ n'ọnwa ole na ole sochirinụ, na-ewere ya na ha kwadoro ụlọ ikpe ndị ọzọ. Onye omebe iwu ga-alaghachi azụ maka nnọkọ pụrụ iche. Ha ga-agụgharị iwu ahụ. Anyị niile maara otu usoro mmebe iwu nwere ike isi were ogologo oge.
Mgbe ahụ, DOH ga-ahapụrịrị usoro iwu ọhụrụ, mgbe ahụ DOH ga-ahapụ ahapụ ngwa. Mgbe ahụ ha ga-amalite ịnakwere ngwa. Yabụ, enwere m nnukwu olile anya na anyị nwere ike ịnwe ụfọdụ ikikere enyere na 2020. Enwere m obi abụọ, enwere m obi abụọ na anyị ga-enweta ikikere enyere na 2020. Karịa enwere ike agaghị enwe ikikere ndị ọzọ enyere ruo mgbe a. opekata mpe 2021.
Mana enwere m olile anya, ọ bụ ya mere m ji na-agbasi ike na steeti ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere m jiri soro gị rụọ ọrụ na ụfọdụ ngwa Illinois. Achọrọ m isoro gị rụọ ọrụ na ụfọdụ ngwa ndị ọzọ anyị nwetara. Enwetara m otu na West Virginia. Enwetara m otu ọrụ na Georgia m na-arụ ọrụ. N’ezie iso otu di iche-iche di iche-iche n’emekorita aka iji nyere ha aka inweta. Na ọtụtụ n'ime ha bụ ụlọ ọrụ ndị dabeere na Florida na-achọ ịgbbawanye na steeti ndị ọzọ, yabụ.
Mana enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme. Enwere m olile anya na, dịka m kwuru, usoro nyocha ụlọ nyocha nke atọ, enwere m olileanya na m ga-apụta. Enwere m olile anya na a ga-enwe ikike na ụfọdụ n'ime ụlọ nyocha nnwale ndị ọzọ ka… Na ọzọ, ịghachị azụ, ọ bụ ihe niile gbasara onye ọrịa. Achọrọ m ka onye ọrịa nweta ngwaahịa kacha mma ha nwere ike inweta. Ma ọ bụrụ n’ahịa ngwaahịa a abụghị nke nwere njikwa onwe ya na nnwale ahụ, enwere ọtụtụ ihe ọghọm nke itinye ụfọdụ ngwaahịa a na ahịa Florida adịghị enyocha ya.
Ọ ga-ewere iwere otu ma ọ bụ onye nwetara ezigbo osisi. [crosstalk 01:02:36] Oleezi ebe ndị mmadụ ga-ahụ gị nwoke?
Ha nwere ike ịchọta m, ụlọ ọrụ iwu m bụ www.mrcannabislaw.com, nke ahụ bụ M-Rcannabis law.com. I nwekwara ike soro m n’igwe mgbasa ozi niile na #mrcannabislaw.
Egwu. Ehe, anam ekele m n’ekele maka ịbịa na ihe nkiri [crosstalk 01:02:55]. Ma dika Florida na --eputa ihe ohuru, biko bia logharia ya…
Etu ị ga-esi bido Op opires Iwu
by Lauryn | Jul 6, 2020 | Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Ngosipụta Cannabis maka Dispensaries na Ndị Na-enye Ndụmọdụ Vigland, Etu ị ga-esi bido Op opires Iwu
Etu ị ga-esi bido ikpe ikpe ọka iwu ga - abụ ajụjụ mbụ ị ga - ajụ onwe gị ma ọ bụrụ na iwu akwadoro na steeti gị. Ọ bụrụ na ị torola mkpụrụ osisi cannabis n'ụlọ gị amaralarị na ọ bụghị ije n'ime ogige. Chegodi iwere otu osisi…
Ugbo ala nke Cannabis
by Lauryn | Jun 4, 2020 | Azụmaahịa Ancillary Cannabis, Atụmatụ Usoro Nchebe Cannabis, Cannabis Dispensary Security System Plan Umbrella Teknụzụ, Cannabis Ndị Nkesa Cannabis NABIS, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Nabgbọala Cannabis ụgbọ njem NorCal Vans
Ulo ugbo ala Cannabis na-ebufe ego, cannabis, na ihe ndi ozo bara uru na ulo ahia, ulo ahia, na ebe nzuzo. Onye na-ebugharị Cannabis NorCal Vans na-esonyere anyị na onye ọbịa anyị na-ele ọbịa Dustin Robinson iji kparịta ihe kacha mma ...
Onye ọka iwu Pennsylvania Cannabis
by Lauryn | Nwere ike 31, 2020 | 2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Ndị na-eme Cannabis, akụkọ iwu, Mmelite Akụkọ, Pennsylvania Cannabis Lawyer Patrick Nightingale, Iwu Iwu
Onye ọka iwu Pennsylvania Cannabis Pennsylvania onye ọka iwu cannabis, Patrick K. Nightingale na-esonye na-atụle ọganihu cannabis na Pennsylvania. Ntuli aka chọpụtara na 62% nke ndị nwere ike ịme ntuli aka na Pennsylvania ga-eme ntuli aka iji nweta nkwado cannabis. Agbanyeghị, ọganihu na steeti abụrụla…
Kedu ụdị nnyefe Cannabis dị ka ọ dị na Illinois
by Devid | Nwere ike 28, 2020 | Atụmatụ Azụmaahịa Cannabis, Cannabis Ndị Nkesa Cannabis NABIS, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Ọkpụkpụ Illinois iji mkpụrụ osisi cannabis, Uncategorized
Akwụkwọ ikike Ibufe Cannabis nke Illinois nwere ike iyi ihe steeti ndị ọzọ mere na nnyefe mkpụrụ osisi ha. Dị ka anyị kọrọ izu ole na ole gara aga, Controllọ Ọrụ Njikwa Mgbakọ Massachusetts kpebiri ka ịga n'ihu na ikikere nnyefe na nkwenye maka…
Onye ọka iwu Arizona Cannabis
by Lauryn | Nwere ike 27, 2020 | 2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Onye ọka iwu Arizona Cannabis Thomas Dean, Ndị na-eme Cannabis, Mmebe Iwu Cannabis 2020 Iwu Mgbazi Iwu Keith Stroup NORML, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Cannabis na Ballot, Mmelite Akụkọ, Iwu Iwu
Onye ọka iwu Arizona Cannabis onye ọka iwu Arizona cannabis, Thomas Dean, sonyeere na mkparịta ụka cannabis nke Arizona nwere na ọrụ maka 2020. 'Smart na nchekwa Arizona' kwụpụrụ dị ka atụmatụ a ma ama mana ọ gụnyere ikike gị tolite n'ụlọ, ma ọ bụ adreesị. ...
Atụmatụ Azụmaahịa Cannabis
by Lauryn | Nwere ike 27, 2020 | Azụmaahịa Ancillary Cannabis, Atụmatụ Azụmaahịa Cannabis, Ngosipụta Cannabis maka Dispensaries na Ndị Na-enye Ndụmọdụ Vigland, Hemp CBD, Akwụkwọ Nkwado Azụmaahịa Cannabis nke steeti, Na-emeri Ikikere Cannabis
Atụmatụ azụmaahịa Cannabis Achọrọ azụmahịa azụmaahịa ọ bụla na-achọ ịmalite na ụlọ ọrụ cannabis. Atụmatụ azụmaahịa bụ blọprint gị azụmaahịa cannabis ọ nwere ike ime ma ọ bụ mebie ngwa gị. Ide ederede nzuzu ahia nwere ike ibu ...
Mmepu Cannabis maka Dispensaries na Nkịtị
by Lauryn | Nwere ike 20, 2020 | ụlọ akụ cannabis, Ngosipụta Cannabis maka Dispensaries na Ndị Na-enye Ndụmọdụ Vigland, ụlọ ọrụ hemp, Na-emeri Ikikere Cannabis
Protinas Cannabis maka Dispensaries na Nkpuru Okwu cannabis maka ndị na - eweta cannabis ma tolite dị mkpa maka atụmatụ azụmaahịa cannabis gị. Enwere ọtụtụ ndebiri proforma dị na ntanetị mana kedu ihe cannabis proforma na kedu ka ị ga - esi mee echiche ziri ezi ...
Cannabis Iwu Iwu Na South Africa?
by Lauryn | Nwere ike 18, 2020 | 2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Ndị na-eme Cannabis, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Cannabis na Ballot, International Cannabis, ozi ọma cannabis mba ụwa, Bụ Iwu Iwu Ahụ Cannabis na South Africa Dagga Party, akụkọ iwu
Cannabis Iwu Iwu Na South Africa? Iwu a na-eme cannabis na South Africa? Ọ dị mma, ọ gbagwojuru anya. N'otu oge South Africa bụ mba nke anọ na-emepụta cannabis kachasị n'ụwa niile ma ọ bụrụ na i rie cannabis na South Africa na mpụga nke obibi obibi gị, ị nwere ike…
Etu ị ga-esi gbaa ngalaba Cannabis Co
by Lauryn | Nwere ike 13, 2020 | Hemp CBD, ụlọ ọrụ hemp, Otu esi agba Runlọ Ọrụ Nkwado Cannabis Chicago, Hara nhatanha
Etu ị ga-esi na-agba ngalaba ngalaba Cannabis "Etu ị ga-esi rụọ ọrụ co-op cannabis?" bụ nnukwu ajụjụ iji jụọ onwe gị ma ị nwere mmasị na ụdị ngbanwe kachasị mma nke na-agba azụmaahịa cannabis gị. Ndi oru cannabis na ndi mmadu anakpo ndi mmadu na enweta otutu ihe di iche-iche! Ha na ...
Etu ị ga-esi mepee ụlọ ọrụ na-eweta Cannabis na Massachusetts
by tom | Nwere ike 13, 2020 | Uncategorized
Nnukwu ozi maka akwụkwọ ikike inyefe ihe ntụrụndụ si na Massachusetts Cannabis Control Commission (CCC) na nzukọ ọgbakọ ọ na-eme kwa ọnwa na Mee 7th. Nke kacha dị mkpa, CCC mere ntụli aka iji iwepụ ntụrụndụ-naanị ikikere na inye nkwado nye…
Mmebe iwu Cannabis New Zealand
by tom | Nwere ike 8, 2020 | ozi ọma cannabis mba ụwa, New Zealand
Mmepụta Mmebe Ahụ Cannabis na-abata na mmepụta iwu Cannabis na New Zealand nwere ike ịnọ ebe a tupu ogologo oge! Na Satọde Septemba 19, 2020, New Zealand nwere ike ịtụ vootu iji mebie cannabis site na ntụgharị aka. Ndị mmadụ ga-ekpebi na votu na-ejighi iwu ọ bụla ma ha ...
International Church nke Cannabis
by Lauryn | Nwere ike 4, 2020 | 2020 Federal Cannabis Legalization Marijuana Policy Project, Azụmaahịa Ancillary Cannabis, Ndị na-eme Cannabis, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Iwu Cannabis Florida Mazi Cannabis Iwu, International Church nke Cannabis, Iwu Iwu
International Church nke Cannabis Na International Church nke Cannabis, ndị na - eme ihe ndozi na - ezukọ iji rie cannabis na obodo nwere ahụmịhe. Onye ndọrọndọrọ ọchịchị ji cannabis mee ka, “kpughee ụdị kacha mma maka onwe, chọta olu okike, ma mee ka obodo jupụta na…
Etu esi eme atụmatụ mmemme Cannabis
by Lauryn | Apr 29, 2020 | Azụmaahịa Ancillary Cannabis, Mgbasa Ozi Ahịa Cannabis, Etu esi eme atụmatụ ị nweta ihe omume CannabisHi, Kannatopia Cannabis Social Network
Etu esi eme ihe omume Cannabis Etu esi atule ihe omume cannabis? Ajụjụ ọtụtụ ndị na - ahazi obodo n’onwe ha na-ajụ ajụjụ. Ọdịnala cannabis bụ ihe niile metụtara obodo, yana omume ịdọpụ mmadụ n'etiti onwe ya emeela ohere maka ihe omume obodo iji gaa n'ihu. Izu a,...
News Cannabis Akụkọ
by Lauryn | Apr 25, 2020 | Kachasị Cannabis Pọdkastị MJBulls Media, Akụkọ Cannabis Akụkọ Mmekọ, Cannabis Stock News CFN Media, ebuka ebuju
Akuko akụkọ osisi Cannabis bụ akụkọ dị ugbu a. Mgbe ndị mmadụ na-eche 'ahịhịa ụlọ ọrụ' cannabis 'na-abata n'uche n'ihi ọtụtụ ebumnuche. E chepụtara ya na ụlọ ọrụ cannabis bụ nkwụghachi ụgwọ, mana kedu ka ebuka cannabis si agbatị n'oge COVID-19? ...
Kpọọ Anyị (309) 740-4033 || e-mail Us tom@collateralbase.com